NLD YOUTH LA MALAYSIA: August 2011
သန်းရွှေနှင့် သာ သက်ဆိုင်သည့် အခြေခံဥပဒေထက်မြင့်သည့်အာဏာ
သြဂုတ်လ (၂၆)သောကြာနေ့က ကျင်းပသည့် စတုတ္ထနေ့မြောက် သန်းရွှေလွတ်တော် ပုံမှန် အစည်းအဝေးမှာ သင်္ဃန်ကျွန်း လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အမတ် ဦးသိန်းညွန့် အဆို တင် သွင်းသော အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသားခွင့် အဆိုကို လွတော်ဥက္ကဌမှ တဆင့်သမ္မတဆီတင်ပြဖို့ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်သည့်အခါ လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် (၁၅) ဦးနှင့် တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ် (၂) ဦးက ကန့်ကွက်မဲမရှိထောက်ခံခဲ့ပါသည်။
၁၉၆၃ဧပြီလ (၁)ရက်နေ့ တော်လှန်ရေးကောင်စီ လွတ်ငြိ်မ်းချမ်းသာ ခွင့်၊ (၁၉၈၀) မေလ (၂၈) မြန်မာ့ ဆိုရှယ်လစ် လမ်းစဉ်ပါတီ ရဲ့ လွတ်ငြ်ိမ်းချမ်းသာခွင့် ယခု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ အဝေးရောက်နေတဲ့သူတွေ ပြန်လာဖို့ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် အမိန့် အမှတ် ၂၈/ ၂၀၁၁ အမိန့်တို့ကို မြန်မာ့ အကျဉ်းသား သမိုင်းတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
သို့ရာတွင်လည်း တစ်ချိန်ထဲ တစ်ရက်ထဲမှာပင် အင်းစိန်ထောင်တွင်း အထူးတရားရုံးမှ ဗိုလ်ကြီးဟောင်း နေမျိုးဇင်အား ဧပြီလ (၂)ရက်နေ့ က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး အီလက်ထရောနစ် ပုဒ်မ (၃၃ က ) နှင့် ထောင်ဒဏ်(၁၀)နှစ် ချမှတ်ခဲ့ပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံသို့ လာရောက်ခဲ့သော ကုလသမဂ္ဂ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် ကင်တားနား ဟာ (၅)ရက်ကြာခရီးစဉ် ပြီးဆုံးလို့ ပြန်မထွက်ခွါမှီ သတင်းစားရှင်းလင်းပွဲမှာ နိုင်ငံရေးအကျင်းသားတွေကို ပြန်လွတ်ပေးဖို့ ကိစ္စရပ်သည် အမျိုးသားသင့်မြတ်ရေးနှင့် နိုင်ငံတကာ ရေးရာတို့တွင် အမတန် အရေးကြီးကြောင်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါသည်။
မြန်မာ့ရုပ်မြင်သံကြား သတင်းစဉ်မှာ ပြည်ထောင်စု တရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းက (၁၉၈၈ ခုနှစ် စစ်တပ် အာဏာသိမ်းချိန်မှစပြီး ယနေ့ သိန်းစိန်လက်ထက်အထိ ပြောဆိုနေကြ စကား အသုန်းအနှုန်းဖြစ်သော ) မြန်မာနိုင်ငံမှာ နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသား သို့မဟုတ် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျနေသူများ ယခု မြန်မာပြည်အကျဉ်းထောင်များထဲတွင် လုံးဝ မရှိပါဘူးဟု ငြင်းဆို ကြေငြာသွားခဲ့ပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါသတင်းအချက်အလက်များကို ကိုးကားခြင်းအာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ လက်ရှိ တပ်မတော်သား ၂၅% ပါဝင်သော ဦးသိန်းစိန် ဦးဆောင်သည့် အစိုးရအထက်တွင် နိုင်ငံရေး သိပ္ပံ နှင့် ဖြစ်စဉ်တို့ကို လေ့လာလိုက်စားသော ပုဂ္ဂိုလ် များသာ မီးမောင်ထိုးပြနိုင်သည့် “ Hi- Policy” ဟုခေါ်ဆိုသည့် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေ အထက်တွင်ရှိသော မူဝါဒကို ဆွဲကိုင်ထားသော လူ တစ်ဦးတယောက် သို့မဟုတ် ကော်မတီ တစ်ရပ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ် သို့မဟုတ် ဘုရင်နှင့် ဘုရင့်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဟူုသည့် အခြေခံဥပဒေထက်မြင့်သည့်အာဏာ “Above Constitution Power” ကို သန်းရွှေ၊ မောင်းအေးနှင့် စစ်ကော်မရှင်တို့ က ချုပ်ကိုင်ထားသဖြင့် သိန်းစိန်၏ ပါးစပ်မှ ချီးစားပြောမှ ယုံမည်ဖြစ်သည့် ပျော့ပြောင်းသော မူဝါဒ ပုံစံဖြင့် နိုင်ငံတကာနှင့် အတိုက်အခံနိုင်ငံရေး အဖွဲ့အစည်းများ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ သို့ ချဉ်းကပ်နေသော်လည်း (၂၀၀၈) အခြေခံဥပဒေအရ သမ္မတကိုယ်တိုင် အထူးခွင့်ရေး အာဏာ လုပ်ပိုင်ခွင့် အပ်နှင်းထားသော်လည်း နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားလွတ်မြောက်ရေး နှင့် အထွေထွေလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို သိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် အခွင့်အာဏာ မရှိသည်ကို ထောက်ရှု့ခြင်းအားဖြင့် သိန်းစိန်အစိုးရသည်လည်း စစ်တပ်၏ အသုံးတော်ခံ ရုပ်သေး အစိုးရ ဖြစ်သည်ဆိုသည့်အချက်ကို ရဟန်းရှင်လူ၊ ကျောင်းသား ပြည်သူ တစ်ရပ်လုံးကနဂိုတည်းက အသိပင်ဖြစ်သည်။
လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများ ၏ သုံးသပ်ချက်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 4:16 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
UNHCR က ပြည်တော်ပြန်မည့်အရေး ဖယ်ရှား အတည်ပြုချက်ပေး
မလေးရှား ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ပြောရေးဆိုခွင့် ရှိသူက မလေးရှားရောက် ဒုက္ခသည်များ အရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပြောဆိုသည်မှာ UNHCR အသိအမှတ်ပြု စာရွက်နှင့် ကဒ် ကိုင်ဆောင်သူ အားလုံး သည် မလေးရှားလ၀က 6P - စီမံကိန်းတွင် မဖြစ်မနေ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် မှသာလျှင် လုံးဝ နေ့ရပ် သို့ ပြန်ပို့လိမ့်မည် မဟုတ်ကြောင်း အသိအလင်း ယနေ့ Free Malaysia Today သတင်းမှ ထုတ်ပြန်ကြောငြားထားသည်ကို လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများမှ အကျဉ်းချုံး ဘာသာ ပြန်ဆို ထားပါသည်။
PETELING JAYA ….UNHCR မှ ဒုက္ခသည်များ ကြောက်ရွံ့နေသည့် ပြန်တော်ပြန်အရေး ကို မလေးရှာ ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ UNHCR သို့ ပေးပို့စာဖြင့် ထောက်လောင်းထောက်ခံ အတည်ပြု လိုက်ပါသည်။
မလေးရှားအစိုးရမှလည်း UNHCR မှ အသိအမှတ်ပြုထားသော စာရွက်နှင့် ကဒ် ကိုင်ဆောင်သည့် ဒုက္ခသည် အားလုံးကို နဂိုရှိရင်းစွဲ အနေအထားတိုင်း ဆက်လက်နေထိုင်ခွင့် ပြုရန် ထပ်လောင်း အတည်ပြု ပြောဆိုသွားပါသည်။
ဒုက္ခသည်များအတွက် သတင်းကောင်း …..
တရားမ၀င်လုပ်သားများအတွက် 6P- စီမံကိန်း ဆောင်ရွက်နေသော်ငြားလည်းပဲ တရားဝင် လုပ်သား အားလုံးအတွက်လည်း ၎င်းစီမံကိန်းအတိုင်း များမကြာမီ ဆက်လက်အကောင်အထည် ဖေါ်ဆောင်၇ွက်သွားမည်ဟု ပြည်ထဲရေး ၀န်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန် ကြေငြာထားပါသည်။
အထက်ဖေါ်ပြပါ ဒုက္ခသည်များနှင့် သက်ဆိုင်သည့် 6P - စီမံကိန်းအတွက်လည်း မလေးရှားအစိုးရနှင့် ၎င်း၏ ၀န်ကြီးဌာနများ ဖြစ်ကြသော ပြည်ထဲရေး၊ လ၀ကနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ တို့အား ပြည်တွင်းပြည်ပ မီဒီယာများမှ တရားမ၀င်လုပ်သားနှင့် ဒုက္ခသည် များအတွက် သီးခြား ကဏ္ဍ ခွဲထုတ် လုပ်ဆောင်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အပေါ် ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဝေဖန် ထိုးနှက်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပေသည်။
UNHCR မှ Yante က “ ဒီကိစ္စဟာ UNHCR နှင်း မလေးရှား အစိုးရအကြား သိသာထင်ရှားသည့် အခွင့်အလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း” ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါသည်။
Yante မှ ဥပဒေ စိုးမိုးရေး သက်ဆိုင်ရာ ရဲ့အရာရှိများမှ မည်သူ မည်ဝါဖြစ်ကြောင်း သတ်မှတ် ခွဲခြားခံရသည့် ဒုက္ခသည်တို့အား ပိုမို အားဖြည့် အကာအကွယ်ပေးနိုင်လိမ့်မည်ဟု ထပ်လောင်းပြောဆိုသွားပါသည်။
ဒုက္ခသည်တို့အား တရားဝင် အလုပ် လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် ၎င်းနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သဘောတူညီချက် များကိုလည်း UNHCR နှင့် မလေးရှား အစိုးရတို့အကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူ လိုအပ်နေသေးကြောင်း ဖြည့်စွက် ပြောဆို သွားပါသည်။
မှတ်ချက်။ ။ ဤသတင်းအား ယနေ့ Free Malaysia Today သတင်း/Web ကြီးမှ အသိအလင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြားသွားပါသည်။
UNHCR allays deportation fears
PETALING JAYA: The United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) today brushed aside fears that the Home Ministry intended to deport UNHCR card holders who register under the 6P amnesty programme.
“UNHCR has received confirmation that the government has no intention of deporting UNHCR document holders who register under the 6P programme,” its Kuala Lumpur spokesperson Yante Ismail told FMT.
“Malaysia has allowed refugees and asylum-seekers registered with UNHCR to remain in Malaysia for as long as they are in need of international protection and this will continue,” she added.
She was responding to the fiasco that happened on Tuesday where about 10,000 refugees and asylum seekers had turned up at the Immigration Department following an alleged eleventh hour order by the Home Ministry for them to register under the 6P amnesty programme.
A bulk of these UNHCR card holders were turned away as the Immigration Department was ill-prepared and said that they could only process 2,500 applications daily.
Home Minister Hishammuddin Hussein yesterday said that no such order was issued.
Yante said the registration of UNHCR card holders under the 6P programme commenced on Tuesday by the Immigration Department with UNHCR’s cooperation.
She said due to the overwhelming number of refugees and asylum seekers who turned up for the exercise,anew system would be put in place immediately to enableamore systematic registration.
UNHCR card holders also expressed fear over possible deportation after registration.
The fear was sparked off by the “illegal immigrants registration slip” which containedastatement which read “Tujuan: Pulang Ke Negara Asal” (Purpose: Return to Home Country).
Responding to this, Yante reassured that this did not apply to refugees and asylum-seekers as they could have been issued the same documents meant for migrants workers.
She said when UNHCR learnt of the “return slips” on Wednesday, it contacted the government and the latter would now rectify the documents for UNHCR card holders.
The 6P registration process was initially meant to register illegal migrant workers. However, the ministry later announced that legal foreign workers would have to register as well.
The move to register refugees and asylum seekers under the programme was criticised by those who argued that refugees were categorically different from migrant workers.
Yante defended the registration arguing that it wasa“significant opportunity” to improve the status of this group as they would be documented withinanational database.
“We see this as leading to greater protection for refugees, particularly against arrest and detention when their identities can be easily verified by law enforcement officials,” she said.
Yante added that there wasaprinciple agreement with the government authorities that refugees would be allowed to work legally. However, the details would still need to be worked out.
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 7:05 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
မလေးရှား HEI မှ မလေးရှားနိုင်ငံထုတ် The Sun သတင်းစာသို့ မြန်မာဒုက္ခသည်အရေး စိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်း အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ကဏ္ဍ
မလေးရှား NGOs အဖွဲ့ တခုဖြစ်သည့် HEI မှ ဒုက္ခသည်များမှတ်ပုံတင်အရေးစိုးရိမ်မကင်းဖြစ်HEIအဖွဲ့ သည်မလေးရှား နိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည်များ၏ ကျန်းမာရေးကိုနီးကပ်စွာ စောင့်ကြည့်နေသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု ဖြစ်သည်။မိမိတို့ အနေဖြင့်ယနေ့(သြဂုတ်၂၃)ရက်နေ့တွင်6Pစီမံကိန်းတစ်ရပ်၏အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောကိုယ်ရေးအချက်အလက် ရယူခြင်း၊ ဓါတ်ပုံရိုက်ယူခြင်း၊ လက်ဗွေနှိပ်ပုံစံယူခြင်း တို့ကို PUTRAJAYA လဝက ဌာနတွင် လေ့လာစောင့်ကြည့်မှု များပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် (၁)ဒုက္ခသည်များအတွက်ရှင်းလင်းပြတ်သားသောမှတ်ပုံတင်ရယူခြင်းအစီအစဉ်အားနည်းနေခြင်းPUTRAJAYAသို့လာရောက်သည့်ဒုက္ခသည်များအတွက် တိတိကျကျသတ်မှတ်ထားသောနေရာထိုင်ခင်းမရှိသည့်အတွက်ဝရုန်းသုန်းကား ဖြစ်နေခြင်း (၂)ရဲတပ်ဖွဲ့များမှ၎င်းလူအုပ်ကြီးအားစနှစ်တကျဖြစ်စေရန်ကြိုးပန်းအားထုတ်ရာတွင်မလိုအပ်ဘဲလက်ဖြင့်အတင်းအ ကြပ်တွန်းထုတ်ခြင်း၊တရွတ်တိုက်ဆွဲထုတ်သွားခြင်း၊ နံပတ်တုတ်ဖြင့်ရိုက်နက်ခြင်း (၃)မွေးကင်းစကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏မိခင်များ၊သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊နာမကျန်းသူများတို့သည်မတ်တတ်ရပ်ပြီး၎င်းတို့ အလှည့်ကိုအချိန်ကြာရှည်စွာစောင့်စားနေရခြင်း (၄) ဒုက္ခသည်တစ်ဦးချင်းစီရရှိလာသည့်စာရွက်(Slip Pendaftaran PATI ) တွင် (Tujuan: PULANG KE NEGARA ASAL ) ဟုခေါ်ဆိုသော ရည်ညွှန်း …… နေရပ်သို့ ပြန်ရန်ဆိုသည့်စာတန်းများပါရှိခဲ့ပါသည်။ ၁၉၅၁ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်း စာချုပ်စာတမ်း အပိုဒ် (၃၁) အရ မူလနေရာဌာနသို့ ပြန်လည်ပို့ ဆောင်ခွင့်မရှိ “ စာချုပ်လက်မှတ်မထိုး ထားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်ပို့ဆောင်ခွင့်ရှိသော်ငြားလည်း၊ ဘာသာရေး၊အမျိုးသားရေး၊ နိုင်ငံရေးသဘောထားအမြင် ကွဲပြား၍ထွက်ပြေးလာသောဒုက္ခ သည်တစ်ယောက်အား၏မူရင်းနေရပ်သို့ ပြန်ပို့ရန်မရှိစေရဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ (၅)လက်ရှိ6Pစီမံကိန်းအစီအဉ်အရဒုက္ခသည်အရေးကိုမည်သို့မည်ပုံဦးတည်ဖြေရှင်းရမည်ဆိုသည့်တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးပွဲ များနည်းပါးနေသည်ကို မလေးရှားနိုင်ငံလူမှုအဖွဲ့အစည်းများအတွင်းတွေ့ မြင်နေရပေသည်။ သေချာရေရာမှူမရှိသော 6Pမှတ်ပုံတင်ရယူမှုအစီအစဉ်သည်ဒုက္ခသည်များအားသောကရောက်စေခြင်း၊ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးပိစေခြင်း၊စိတ်ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုပြဿနာမျိုးစုံကိုပေါ်ပေါက်စေပါသည်။ HEI သည် မလေးရှာနိုင်ငံလဝက ၁၉၅၉/၁၉၆၃ အက်ဥပဒေအရ ဒုက္ခ သည်များအပေါ်ကျရောက်ရိုက်ခတ်မည့်တရားမဝင်လုပ်သားနှင့်တရားမဝင်နေထိုင်မှုအပေါ်ရဲတပ်ဖွဲ့ ၊ရေလာတပ်ဖွဲ့ ၊ လဝကဌာနနှင့်မလေးရှားအစိုးရတို့ ကကြိမ်ဒဏ်၊ငွေဒဏ်၊ထောင်ဒဏ်၊ပြည်နှင်ဒဏ်၊ပေးမည့်အရေးအတွက်စိုးရိမ်ပူပန်မိပါသည်။HEIသည်မလေးရှားအစိုးရအားဒုက္ခသည်များအပေါ်ထားရှိသည့် 6Pစီမံကိန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို တရားဝင်လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖေါ်ပေးရန်နှင့်လုံလောက်သော ဆက်သွယ်လမ်းပြဆောင်ရွက်မှုများကိုသက်ဆိုင်ရာ ဒုက္ခသည်အဖွဲ့ စည်းတို့ နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန်နှင့် ဒုက္ခသည်အရေးချက်ချင်းတုန့် ပြန်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် လိုအပ်သည့်အစီအစဉ်များကိုချမှတ်လုပ်ဆောင်သွားရန်ဤအိတ်ဖွင့်ပေးစာကဏ္ဍမှစိုးရိမ်ပူပန်မိကြောင်းတောင်းဆိုဖေါ် ပြအပ်ပါသည်။
မှတ်ချက် 25/08/2011 နေ့ထုတ် The Sun သတင်းစာပါ စာမျက်နှာ (၁၄)တွင်ပါရှိသည့် အိတ်ဖွင့်ပေးစာ ကဏ္ဍ
ကို လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများမှ အကျဉ်းချုပ် ဘာသာပြန်ဆို ဖေါ်ပြပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 3:28 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
UNHCR Malaysia သို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာ
မစ္စတာ အလန်ဗာနွန်နှင့် သက်ဆိုင်ရာ UNHCR အရာရှိကြီးများ ခင်မျာ
ကုလသမ္မကဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီးရုံး၊မလေးရှာ။လေးစားအပ်ပါသော UNHCR ကိုယ်စားလှယ်တော်ကြီးများ၊အရာရှိကြီးများ၊ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိကြီးများနှင့် သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးရှိ ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးမှူးများခင်ဗျာ…..
UNHCRမှအသိအမှတ်ပြုဒုက္ခသည်စာရွတ်နှင့် ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူများအားလုံး Putrajaya လဝကဌာနသို့ 
သွားရောက်၍မိမိကိုယ်ရေးအချက်အလက် ၊ဓါတ်ပုံနှင့် လက(်၁၀)ချောင်းလက်ဗွေပုံစံ မှတ်တန်းတင်ရယူရ
မည်ဆိုသညိ့သတင်းအားUNHCRဘက်မှရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းထုပ်ပြန်ကြေငြာပေးပါရန် ကျွန်တော် မှမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
၎င်းအစီအစဉ်သည် မလေရှနိုင်ငံရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များအားပိုမိုစိတ်သောကရောက်စေ
မနေ့ ကသြဂုတ်က၂၃ရက်နေ့ နံက်(၈)နာရီတွင်စတင်သည့် UNHCRနှင့်မလေးရှားလဝက 6P စီမံကိန်း တွင်UNHCRမလေးရှား၏ အစီးစအစဉ် ညံ့ဖျင်းမူ့ကြောင့် တဖြေးဖြေးများပြားလာသောဒုက္ခ
သည်လူအုပ်ကြီးသည်သူ့ ထက်ငှါအလျှင်စလိုလက်ဗွေရယူရန်တိုးဝှေ့ ကြသည့်အတွက်ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရ
သည်ဖြစ်ခါ လဝကဌာနမှ မလေးရှားရဲတတ်ဖွဲ့ နှင့် ရေလာ တတ်ဖွဲ့ တို့ ကိုခေါ်
ယူအကြောင်းကြားခဲ့ရာ ၎င်းတို့ ကဒုက္ခသည်အုပ်ကြီးအားအကြောင်းမယ့်လူသားမဆန်စွာနံပတ်တုတ်ဖြင့်ရိုက်
နက်ထိန်းသိမ်းခဲ့သဖြင့် ကလေးများ၊မိခင်များ၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ လူငယ်လူရွယ်များ၊ ဒါဏ်ရာ အနာတ ရ ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။
ထို့ကြောင့် ဒုက္ခသည် များ ရရှိသည် 6P-စီမံကိန်းစာရွက်တွင် “PULANG KE NEGARA ASAR ‘’ ဟုဆိုသည့် နေရပ်သို့ပြန်ရန် အင်္ဂလိပ်ဘာသာအားဖြင့် “RETURNING HOME (OR) LEAVING (OR) COMING BACK NATIVE COUNTRY ‘’ ဟုတ်အဓိပ္ပာယ်ရသော စာတမ်းပါရှိပါသည်။
ထိုသို့ဖြစ်ခဲ့မည်ဆိုလျှင် ဒုက္ခသည်များအား ကာကွယ်ဆောင့်ရှောက်ရေး ဟူသည့်UNHCR ၏ အခန်းကဏ္ဍ သည် မလေးရှားလ၀က၏ လုပ်ရပ်အောက်တွင် လက်ကိုင်တုတ်တခုဖြစ်နေပါသလားဟု မေးခွန်းထုတ်ရမည်ဖြစ်သည်။
UNHCR မလေးရှားကိုယ်တိုင်က မြန်မာဒုက္ခသည်အားလုံးကို မလေးရှားအကျဉ်းထောင်ထဲသို့ တွန်းပို့နေပါသလား၊ ၄င်းဒုက္ခသည်အားလုံးကို ပြည်နှင်ဒါဏ် ပေးနေပါသလား။
ဒုက္ခသည်အရေးနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် UNHCRE ဆိုတာဘာလဲ UNHCR နှင့် ကုလသမဂ္ဂ UNOs အဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင်က ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး ဇာတ်ခုံတွင် ကိုယ်မျက်နှာကို အိုးမည်း သုတ်နေပါသလား။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မှ 6P- WORK PERMIT စာရွက်စာတမ်းနှင့် ယမန်နေ့က ဒုက္ခသည် မိသားစုတစ်စု ရရှိသည် 6P- စီမံကိန်း စာရွက်ကို UNHCR ရဲ့ အရာရှိကြီးများ တိုက်ရှု့ စစ်ဆေးနိုင်ရန်တင်ပြအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင် UNHCR မှ CBOs အဖွဲ့အစည်းအချို့သို့ နှုတ်စကားဖြင့် ၄င်းအစီစဉ်ကို ညွန့်ကြားချက် ပေးထားသော်ငြားလည်းပဲ CBOs နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် ဒုက္ခသည် အသိအမှတ်ပြု စာရွက် နှင့် ကဒ် ကိုင်ဆောင်သည့် ဒုက္ခသည်များအား ရေရာသေချာသော ညွန်ကြားချက်များ ထုတ်ပြန်ချင်း မရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည့်အတွက် တိကျသော သတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြားပေးပါရန် ထိုသို့မဟုတ်လျှင် ဒုက္ခသည်များအားလုံးကို UNHCR ကိုယ်တိုင်က မလေးရှားမှ မောင်းထုတ်နေသလို့ ဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
အခြအနေအရ ဖြစ်ပေါ်လာသော မြန်မာဒုက္ခသည်များ အားလုံး၏ လက်ရှိအရေးကို တာဝန်ယူ ဆောင်ရွက်ဖြေရှင်းပေးရန် UNHCR မှ အပြည့်အ၀ တာဝန်ရှိပါသည်။
ထိုသို့ မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လျှင် ကျွန်တော်တို့ ဒုက္ခသည်အားလုံး မလေးရှားထောင်ထဲသို့ သွားရမည်လော၊သို့မဟုတ် ပြည်နှင်ဒါဏ်ပေးခံရမည်လော့ ..
နိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်များအရေး ဆောင်ရွက်ဖြေးရှင်း ပေးနေသော UNHCR အနေဖြင့်လည်း ယခုဒုက္ခသည် အရေးကို မည်ကဲ့သို့သော အာမခံချက် ပေးနိုင်မည်လော…
မိမိအပါအ၀င် ဒုက္ခသည်များအားလုံးသည် မလေးရှားနိုင်ငံရှိ UNHCR မှ ထုတ်ပြန်ကြေငြာမည့် သတင်းကောင်းအား မျှော်လင့်စောင့်စားရင်း……
Mr. Myat Ko Ko (မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည် ကဒ် ကိုင်ဆောင်သည့် သာမာန် အညတြ ဒုက္ခသည် တစ်ဦး)
Mr. Myat Ko Ko (UNHCR Refugees-Reg-Card-Number-Holder)
ပေးပို့သူ ကိုမြတ်ကိုကို မလေးရှားနိုင်ငံရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်ကဒ်ပြားကိုင်ဆောင်သူမှ လွင်ပြင်သို့ မေတ္တာရပ်ခံ သတင်းထုတ်ပြန်ပေးရန် တင်ပြလာသည့်အတွက် လွင်ပြင်မှလည်း မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကို ကမ္ဘာသို့ထပ်လောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ကြေငြာအပ်ပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 7:35 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
မလေးရှားနိုင်ငံ UNHCR မှ Mr.Myat Ko Ko ၏အိတ်ဖွင့်ပေးစားအား ပြန်လည်၍ ဖြေကြားချက်ကို ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း….
မလေးရှား UNHCR မှ အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်
သို့ …. မလေးရှားနိုင်ငံရောက် UNHCR ဒုက္ခသည် အသိအမှတ်ပြု စာရွက်နှင့် ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ အားလုံး သြဂုတ်လ ၂၃ရက်နေ့ ၂၀၁၁ တွင် စတင်မည့် မလေးရှားနိုင်ငံ လ၀က 6P- စီမံကိန်းအတွင်း UNHCR မလေးရှားထံသို့တရားဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဒုက္ခသည် စာရွက်နှင့် ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူ အားလုံး PUTRA JAYA မလေးရှားလ၀က ဌာနသို့တစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီး၏ (Bio-data)ကိုယ်ရေး အချက် အလက်နှင့်၊ (Biometric) ဓာတ်ပုံနှင့် လက်ချောင်းဆယ်ချောင်းလုံးလက်ဗွေနှိပ်ယူရန် အစီအစဉ် ကို UNHCR မှ မလေးရှားလ၀ကသို့ ညှိနှိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် .
၄င်းအစီအစဉ်ကို ပြီးပြတ်စေရန် လပေါင်းများစွာ အချိန်ယူရမည်ဖြစ်သည်၊
၂၄ရက်နေ့ UNHCR မလေးရှားနှင့် အစိုးရတို့သဘောတူညီ ချက်အရ ပထမအဆင့် အစီအစဉ်အဖြစ် KUALA LUMPUR နှင့် SELANGOR ဒေသရှိ ဒုက္ခသည်အားလုံး အကျုံးဝင်သည်။
များပြားသော ဒုက္ခသည် အရေအတွက်များကြောင့် ယင်းအစီအစဉ်ကို စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖေါ်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည့်အပြင် CBOsဟု ခေါ်ဆိုသည့် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အခြေပြု သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးကပ်စွာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။
၄င်းအဖွဲ့အစည်းများ၏ သဘောဆန္ဒနှင့် အညီ ၄င်းအဖွဲ့အစည်းများမှ ဒုက္ခသည် စာရွက်နှင့် ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူတို့အား ရွေးချယ်စာရင်းပေးသွင်းရမည်ဖြစ်ပြီး အသုတ်လိုက်အသုတ်လိုက် PUTRA JAYA လ၀ကဌာနသို့ ၂၃ရက်နေ့မှစ၍ ၂၆ရက်နေ့အတွင်း ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်၊ ဒုတိယအစီအစဉ်အဖြစ် စက်တင်ဘာလတွင် စတင်မည်ဖြစ်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်ကို UNHCR မှ ထပ်လောင်း၍ ကြေငြာမည်ဖြစ်သည်။
၂၃ရက်နေ့မှ စ၍ ၂၆ရက်နေ့အတွင်း PUTRA JAYA မလေးရှားလ၀က ဌာနသို့ ပထမအဆင့် အစီအစဉ်အဖြစ် အောက်ဖေါ်ပြပါ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအကျုံးဝင်ပါသည်၊
ACR / CRC / BRO / MMWC/ FRO /KAREN /KARENNI/ KACHIN/ DAI/ MON/ SHAN
ဗုဒ္ဒဟူး၂၄ရက်မှစ၍ သောကြာ ၂၆ရက်နေ့အထိ တစ်နေ့တာအတွက် ဒုက္ခသည်ဦးရေ (၂၅၀၀)ကို စီစဉ်ဆောင်ရွက်ပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ CBOs အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းဆီမှ ဒုက္ခသည်ဦးရေ (၆၀၀) ကို တစ်နေ့လျှင် (၂၀၀)နှုန်း ပို့ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်၊ အကယ်၍ 6P -အစီအစဉ်တွင် ထင်ထားသည်ထက် ပိုများပါက ၄င်းအစီအစဉ်ကို နေ့ရက် ထပ်မံ တိုးချဲ့ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုချင်းစီသည် အောက်ဖေါ်ပြပါ အချိန်နာရီနှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ဒုက္ခသည် အရေအတွက်အတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်ပေးရမည်ဖြစ်သည်။
CRC/ACR- ၂၀၀/ ၂၀၀ ဒုက္ခသည် နံက်(၈နာရီ)
BRO/ MMWC- ၂၀၀/၂၀၀ဒုက္ခသည် နံက်(၁၀နာရီ)
FRO/ KAREN- ၂၀၀/၂၀၀ဒုက္ခသည် နေ့လည်(၁၂နာရီ)
KACHIN/ KARENNIE- ၂၀၀/၂၀၀ဒုက္ခသည် နေ့လည်(၂နာရီ)
SHAN- ၂၀၀ ဒုက္ခသည် နေ့လည်(3နာရီ)
DAI/MON- ၂၀၀/၂၀၀ဒုက္ခသည် ညနေ(၄နာရီ)
အောက်ဖေါ်ပြပါ အဖွဲ့အစည်း များသည် ၄င်းတို့၏အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးမှ ဒုက္ခသည်များကို ပထမအစီအစဉ်အတိုင်း လုပ်ဆောင်စရာမလိုပဲ UNHCR ၏ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့် အညီ ဒုတိယအစီအစဉ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်သွားရပေလိမ့်မည်။ ၄င်းတို့မှာ
BMC/ RSM/ ERCA/ STROM/ NLD/ ALD/ ZAM/ ZIM/ FALAM AGAPE/ ARAKAN
ကျွုနိုပ်တို့ UNHCRမှရရှိသော များပြားလှသည့် သတင်းမေးမြန်းချက်များကြောင့် အထက်ဖေါ်ပြပါ အစီအစဉ် ၂ရပ်လုံးနှင့် သက်ဆိုင်သော ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု အခြေပြု သည့် လူ့အဖွဲ့အစည်းများ ပါတီအဖွဲ့အစည်းများ ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် မသက်ဆိုင်သည့် UNHCR
အသိအမှတ်ပြု ဒုက္ခသည် စာရွက်နှင့် ကဒ်ကိုင်ဆောင်သူအား ထပ်လောင်းကြေငြာမည့် အစီအစဉ်ကို စောင့်ဆိုင်းကြပါရန် ။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ မလေးရှားနိုင်ငံရောက် ဒုက္ခသည် အားလုံးသည် UNHCR မလေးရှားနှင့်မလေးရှားလ၀က / အစိုးရ တို၏အစီအစဉ်အတိုင်း မဖြစ်မနေ လုပ်ဆောင်သွားရမည်ဖြစ်သည်။
မှတ်ချက်။ ညှိနိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မူ့ 6P- အစီအဉ်အရ UNHCR သည် UNHCR အပိုင်း အတွက်သာ တာဝန်ယူဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး မလေးရှားလ၀ကမှလည်း လ၀က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဥပဒေ သတ်မှတ်ချက်အတိုင်း ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ကျွန်တော်တို့ ထင်မြင်သုံးသပ်မိကြောင်း လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများမှ တင်ပြအပ်ပြပါသည်။
Dear Mr. Myat Ko Ko,
Here is the Annoucement/ Info on the ongoing registration of refugees
under the 6P.
To: All Refugees and Asylum Seekers registered by UNHCR:
Kindly be advised that the Malaysian Government has started to conduct
the registration of refugees and asylum seekers registered by UNHCR
under its 6P exercise beginning yesterday 23 August 2011. This
registration will include the taking of bio-data and biometric
information of all individuals concerned. UNHCR has been requested by
the Malaysian Government to assist in the process by verifying the true
identity of each and every individual concerned. The exercise will
involve 6P registration for all asylum seekers and refugees registered
with UNHCR, and will takeanumber of months to complete.
As for today, 24 August 2011, as agreed by the Malaysian Government and
UNHCR, the first stage of the registration exercise will only be carried
out to those individuals , who reside in Kuala Lumpur and Selangor. Due
to the large number individuals, who will be included in this
registration, it is important that this should be undertaken in an
orderly manner. For this reason, UNHCR will be working closely with
refugee community organizations (CBOS) in mobilising the concerned for
purposes of this registration. UNHCR is in contact with the CBOS and had
worked outascheduling system to have selected population be registered
this week. The schedule will be conducted in different batches and in
accordance to communities that have been identified to send their
members. The first phase of the exercise started yesterday, 23 August
2011 and will continue until August 26, 2011. This will be conducted in
Putrajaya Immigration Office. The second phase of the 6P Exercise will
commence in the month of September, 2011. The dates and venues will be
confirmed. UNHCR will announce the schedule of the second phase once it
For the first phase of the exercise, which will be conducted between
the 23rd August to the 26th August 2011 the following CBOS have been
advised to send their members to the Putrajaya Immigration Office;,
Please. note that with the limited processing capacity by Immigration,
a quota of 2,500 individualsaday is being expected to be processed
from Wednesday (24th August) to Friday (26th August). The above CBOS
have been advised to bringalimit of 600 individuals to be brought to
Putrajaya for the next3days (200aday). Should the number arriving
for 6P registration be larger than the numbers agreed, registration will
be suspended and restarted on another day.
Following is the schedule for the next three days. Each community
should bring the assigned number of individuals at the time which is
CRC/ACR - 400 individuals @ 8am
BRO/MMWC - 400 individuals @ 10am
FRO/KAREN - 400 individuals @ 12pm
KACHIN/KARENNIE - 400 individuals @ 2pm
SHAN - 200 individuals @ 3pm
DAI/MON - 400 individuals @ 4pm
The communities below were briefed not to send their members for the 6P
exercise until further notice;
ARAKAN (informed us that they have engaged an agent to conduct the
exercise for them)
Due to the overwhelming response we have been receiving, its advised
for individuals who do not fall into any of the CBOS above to wait for
further instructions from UNHCR before wanting to proceed to Putrajaya
for the registration. As explained earlier, all UNHCR registered asylum
seekers and refugees will be included in the 6P registration.
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 3:15 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
မလေးရှား လ၀ကနှင့် UNHCR မလေးရှား တို့ ပူးပေါင်း၍ မလေးရှားနိုင်ငံရော မြန်မာဒုက္ခသည် အားလုံးကို မူရင်းနေရပ်သို့ ပြန်ပို့ရန်စီစဉ်နေ………
တစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာသော မြန်မာဒုက္ခသည်များကြောင့် UNHCR မလေးရှားသည် လက်ရှိ ဒုက္ခသည် ပြဿနာကို အလွယ်တကူဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသော ဒုက္ခသည် ဆိုင်ရာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သဘောတူညီချက်များကို ချိုးဖောက်၍ မလေးရှားနိုင်ငံလ၀က 6-P WORK PERMIT အစီအစဉ်ကို အခွင့်ကောင်းယူ၍ မလေးရှား လ၀က ၀န်ကြီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကာ မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားဒုက္ခသည် အားလုံးကို နေရပ်သို့ ပြန်ပို့ရန် ဓာတ်ပုံရိုက် လက်ဗွေနှိပ် အစီအစဉ်ကို သြဂုတ်လ( ၂၃)ရက် နံနက်၈နာရီ မှစ၍ (၂၆)ရက်နေ့အထိ ပထမပိုင်း အစီအစဉ်အဖြစ် တိုင်းရင်းသား အခြေပြု အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံးနှင့် ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ဖြစ် ကျန်ရှိသော လူမူရေး၊ နိုင်ငံရေးပါတီအဖွဲ့အစည်းများ တစ်သီးပုဂ္ဂလ များ အား နိုဝင်ဘာလမှ စတင်လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း
ယခုရရှိသော နောက်ဆုံးသတင်းအရ ….
UNHCR Reg-Documents စာရွက်ကိုင်ဆောင်သူများကို မလေးရှား လ၀က ၀န်ကြီးဌာနမှ ဓာတ်ပုံရိုက် လက်ဗွေနှိပ်ခွင့်မပေးတော့ပဲ UNHCR မှလည်း ၄င်းစာရွက်ကိုင်ဆောင်သူများကို ယနေ့မှစ၍ လုံးဝ တာဝန်မယူနိုင်တော့ကြောင်းအသိပေး ပြန်လွှတ်ခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင် ခံစားခဲ့ရသော စာရွက်ကိုင်ဆောင်သည့် ဒုက္ခသည် တစ်ဦးမှ လွင်ပြင်သို့သတင်းပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ဤကဲ့သို့ UNHCR မလေးရှား၏ ရှက်ဖွယ်လိလိ တာဝန်မဲ့သော လုပ်ရပ်အတွက် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ဒို့ မြန်မာဟု ကြွေးကြော်နေကြသော မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ တော်လှန်ရေး အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး ဒုက္ခသည် အရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးနေကြသော NGOs အဖွဲ့အစည်းအသီးသီး သတင်းဌာနအသီးသီး မှ လက်ပိုက်ကြည့်မနေသင့်ဘဲ မြန်မာဒုက္ခသည်များ အရေးကို ထိရောက်သော ဖိအားပေးမူ့များဖြင့် ကမ္ဘာ့ ကုလသမဂ္ဂ ၊ လူ့အခွင့်အရေး ကောင်စီနှင့် ကုလသမဂ္ဂ ဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာ မဟာဝန်ရှင်တော်မင်းကြီး ရုံးချုပ်သို့ UNHCR မလေးရှား၏ လုပ်ရပ်ကို ထိရောက်စွာအရေးယူပေးရန်နှင့် လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များအရေးကို ချက်ချင်းဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြည်တွင်းလွင်ပြင်မှ သတင်းဖေါ်ပြအပ်ပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 3:29 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
မလေးရှားရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ နံပတ်ဒုတ်ဖြင့်ရိုက်နှိက်ခံရသည့်အပြင် တိုင်းပြည်သို့ ပြန်ပို့မည့်အရေးနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ ….
ယနေ့ ၂၃ရက် ၊နံက်၎နာရီ၊ ၈လပိုင်း၊ အဂါင်္နေ့ ၂၀၁၁ စ၍ မလေးရှားနိုင်ငံ လ၀က ၀န်ကြီးဌာနနှင့် UNHCR မလေးရှား တို့၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် (၁၉)နိုင်ငံအသီးသီးမှ ဒုက္ခသည်များ အားလုံး 6-P WORK PERMiT ပုံစံကဲ့သို့ လက်ဆယ်ချောင်းလုံး လက်ဗွေနှိပ် ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရမည် ဟူသည့် ညွန်ကြားချက်ကြောင့် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာဒုက္ခသည်များ အပါအ၀င် နိုင်ငံအသီးသီးမှ ဒုက္ခသည်အားလုံး KUALA LUMPUR ရှိ ပိုထရာဂျာယာ လူဝင်မူ့ကြီးကြပ်ရေး IMMIGRATION ၀န်ကြီးဌာနချုပ်တွင် တဖြေးတဖြေးချင်း စုဝေး ရောက်ရှိလာရာ နံက်၈နာရီ အချိန်မှစ၍ ယခုသတင်းဖေါ်ပြချိန်အထိ တစ်သိန်းခန့်ရှိသော ဒုက္ခသည် ဦးရေးအားလုံးသည် သူ့ထက်ငှါ လက်ဗွေပုံစံရွက် ရရှိရန် တိုးဝှေ့နေကြရာ လ၀ကဌာနနှင့် UNHCR တို့မှ စီစဉ်ညံ့ဖျင်းမူ့ကြောင့် ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရ ဖြစ်နေသည့် ဒုက္ခသည် လူအုပ်ကြီးအား မလေးရှား ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ RELARများ၏ ရိုက်နှိက်ထိန်းသိမ်းမူကြောင့် အပြစ်မရှိသည့် မြန်မာဒုက္ခသည်များ ကလေးများ မိခင်များ သက်ကြီးရွယ်အိုများ လူငယ် လူရွယ်များ အားလူသားမဆန်စွာ နံပတ်ဒုတ်ဖြင့် ရိုက်နှိက်ထိုးကြိတ် သည်ကို မလေးရှားရောက် ဒုက္ခသည် မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့တစ်ဦးက လွင်ပြင်သို့ သတင်းပေးပို့ပါသည်။
ဒုက္ခသည်များ ရရှိသည့် စာရွက်ထဲတွင်လည်း …..ရည်ညွန်း……PULANG KE NEGARA ASAL ဟုရေးသားထားသော နေရင်းအရပ်သို့ပြန်ပို့ရန်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသော စာသားများအား ထည့်တွင်းဖေါ်ပြထားရာ မြန်မာဒုက္ခသည်များသည် ဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခဆင့်ပြီး မလေးရှားနိုင်ငံအတွင်း ဆက်လက်နေထိုင်ပါကလည်း လ၀က ပြစ်မူဖြင့် ကြိမ်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ်စသည့် ပြစ်ဒဏ်ကြီးကြီးခံရဖွယ်ရှိသည့်အပြင် စစ်မှန်သော ဒီမိုကရေစီ မရရှိသေးသည့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ပြန်လည် အပို့ခံရဘွယ်ရှိနေပါသည်။
လူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒုက္ခသည်အရေး ဆောင်ရွက်ပေးနေသော မလေးရှားနိုင်ငံရှိ UNHCR ဌာနမှလည်း ၄င်းဒုက္ခသည်များအရေးအတွက် ရေရာတိကျသော သတင်းထုတ်ပြန်နိုင်ခြင်း မရှိသည့်အတွက် UNHCR ဌာနသည် မလေးရှားနိုင်ငံ အစိုးရ၏ ဒုက္ခသည် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်ရေး ဌာနတစ်ခု ဟု ဆိုရလောက်အောင် မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်နေပါသည်။
မူရင်း ။ ။လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 10:13 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
UNHCR မလေးရှာ facebook စာမျက်နှာတွင် ဤကဲသို့ ရေးသားထားပါသည်။
To all UNHCR document holders in Malaysia: Please DO NOT go to the Putrajaya Immigration center for 6P registration, until further notification from UNHCR. UNHCR is currently in discussions with the Malaysian Government on this and we will provide you with information on what you need to do, as soon as we can.
UNHCR Malaysia မှမလေးရှိ UNHCR လက်မှတ်ကိုင်းဆောင်ထားသူများသို့ ။UNHCR မှသတင်းမထုပ်ပြန်
ချိန်ထိ Putrajaya ရှိ လူဝင်မှူကြီးကြပ်ရေးဌာနသို့ လဝကပါမစ်အတွက်သွားရောက် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမပြုလုပ်ရန်
မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။အထက်ပါကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ လက်ရှိတွင် UNHCR သည် မလေးအစိုးရနှင့် ဆွေးနွေး
ညှိနှိုင်းမှူများပြုလုပ်နေပြီး မိမိတို့ ဘက်မှတတ်နိုင်သမျှ လိုအက်သောသတင်းအချက်အလက်များကိုထောက်ပံ့
မလေးရှားနိုင်ငံ UNHCR မှ ဒုက္ခသည်များအာ အရေးဖေါ်ကြေငြာချက်ဒီကနေ့ နောက်ဆက်တွဲသတင်း
မနေ့ က မလေးရှားနိုင်ငံ ကွာလာလန်ပူမြို့တော်မှာအခြေဆိုက်လျှက်ရှိနေသော UNHCR မလေးရှားမှ ဒုက္ခသည် အဖွဲ့ စည်းအချို့အားခေါ်၍ လက်ဗွေနှိပ်ရန်ခေါ်ယူအသိပေးပြောကြားပြီးနောက် ဒီကနေ့ မြိုးတော်ကွာလန်လာပူ မလေးရှား လဝကရုံးကြီး ရှိရာ ပူတရာဂျာရာသို့ လာရောက်လက်ဗွေနှိပ်ကြသူများ သောင်းနှင့်ချီနေ၍ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမနိုင်ဖြစ်လာမယ်ကို ဆိုးရိမ်သေားကြောင့် လေလာနှင့် ရဲများရောက်ရှိလာပြီး UNHCR ဒုက္ခသည်ကဒ်ကိုင်
ဆောင်ထားသူ၊စားရွက်များကိုင်းဆောင်ထားသူ သောင်းနှင်ချီနေသော လူအုပ်ကြီးအား ပြန်လည်မောင်းနှင်လွတ်
နေကြောင်း ထိုလက်ဗွေနှိပ်ရန်သွားရောက်သော သူတဦးမှသူ့ ကိုယ်တွေ့ အားပြောပြပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 2:06 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
မလေးရှားနိုင်ငံ UNHCR မှ ဒုက္ခသည်များအာ အရေးဖေါ်ကြေငြာချက်......
မလေးရှားနိုင်ငံ ကာလန်လာပူမြို့ UNHCR ရုံးမှဒီကနေ့ အဖွဲ့ စည်းအားလုံးအားခေါ်၍ အရေးပေါ်အစည်းဝေးတရပ်
ခေါ်ယူ၍့ ထိုးအစည်းဝေးမှ ကြေငြာချက်တရပ်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်ထိုကြေငြာချက်တွင် မလေးရှားနိုင်ငံ UNHCR
မှ ဒုက္ခသည်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားခံရသူအားလုံး (စာ၇ွတ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ကပ်ကိုင်ဆောင်ထားသူ၊ရီချက်
ထိထားသူ) အားလုံး (၃)ရက်အတွင်း မလေးရှာနိုင်ငံ မြို့တော်ကွာလန်ပူမှာရှိတဲ့ လဝကရုံးဆိုက်ရာပူထရာဂျာရာ
ရုံးချုပ်ကြီးသို့ လာရောက်၍လက်ဗွေနှိပ်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် (၃)ရက်အတွင်း လက်ဗွေလာရောက်မနှိပ် သူများအား UNHCR မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ဒုက္ခသည်အဖြစ်မှ ပယ်ဖျက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းအစည်းဝေးတွင်ပြောကြားပါ သည်။ မလေးရှားနိုင်ငံUNHCR နှင့် မလေးရှားအစိုးရ တစုံတခု ညီနေကြောင်းအစည်းဝေးသို့ တက်ရောက် သူများက သုံးသပ်ပြောကြားကြောင်းလည်းကြားသိရပါသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 7:28 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဦးသိန်းစိန် - လေးဦးဂိုဏ်းကို ရာထူးက အမြန်ဆုံးအနားပေးရန်လို
ဦးသိန်းစိန်၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၊ ရထားပို့ဆောင်ရေး ၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း နှင့် နယ်စပ်ရေးရာ ၀န်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် သိန်းဌေးတို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်
တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုကို လိုလားသူများ ဖြစ်လာကြတယ်လို့ သိရတယ်။ သို့ သော် တင်အောင်မြင့်ဦး ဦးဆောင်သော လေးဦးဂိုဏ်းက ဖီလာတိုက်လျက်ရှိတယ်။ စစ်တပ်အတွင်းမှ အမာလိုင်းနှင့်အပျော့လိုင်း အားပြိုင်မှု လို့ သုံးသပ်လို့ ရတယ်။
ဗိုလ်မှုးကြီး ရာထူး အဆင့်မှ အောက်ခြေ တပ်မတော်သားများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့်ဦးသိန်းစိန်
တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုကို အကောင်းမြင်ကြတယ်။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု တိုးတက်မှုတွေရရှိနေစေခြင်တယ်။
အကြီးအကျယ် လာဘ်စား လို့ ရနေတဲ့သူတွေကတော့ တွေ့ ဆုံဆွေးနွေးမှုကို ပျက်စေချင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူလူထု မျော်လင့်တောင့်တာနေတဲ့
ဒီမိုကရေစီနိင်ငံတော်သစ်ကြီးကို သူက ဦးဆောင်တည်ထောင်ပေးခဲ့သူ အဖြစ်သမိုင်းမှာမှတ်တမ်း လိုတယ်
ဆိုရင်တော့ လေးဦးဂိုဏ်း ကို တာဝန်တွေကရပ်နားဖို့ လိုနေတယ်။
မူရင်း ။ ။ မိုးသီး
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 2:09 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ယနေ့မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ... ဓာတ်ပုံ၊ သတင်း
ငယ်ငယ်တုန်းက သီချင်းလေးတပုဒ် ကြားဘူးပါတယ်...။ ဘယ်သူဆိုမှန်းတော့မသိ "မနေ့ကတွေ့တဲ့သူနဲ့ ဒီကနေ့တွေ့တဲ့သူ မတူပါဘူးကွယ်" ဆိုလား...။ ဒီကနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ မြန်မာပြည် သတင်းတွေကတော့ မျက်စိတွေလည်.. လမ်းတွေမှား အပြောင်းအလဲတွေက မြန်ဆန်... သာမာန် ပြည်သူတယောက်လိုပဲ သဘောထားပါတယ် ဆိုတဲ့ ကျွန်တော်တို့ လူထုခေါင်းဆောင်ကို အရပ်သားအစိုးရ ဆိုသူတွေက ချက်ချင်းလက်ငင်းကြီး နွေခေါင်ခေါင်မှာ မိုးရွာချသလိုလို တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုတွေ ဆက်တိုက် ဆိုသလို လုပ်လိုလုပ်၊ နအဖ ခေတ်အဆက်ဆက် လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းဓာတ်ပုံကို ဘေးချိတ် ဖျောက်ဖျက်ထားရာက သမ္မတရုံးခန်းမှာ ချိတ်ပြလိုချိတ်ပြနဲ့ ကြည့်နေ၊ မြင်နေခံစားရတဲ့ ရသတွေကတော့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရာက အခွေကို Slow Motion ပြောင်းပြန် ပြန်ရစ်ပြီး ပြန်ကြည့်နေရသလိုလို၊ ရှေးဟောင်း အသံတိတ်ကားတွေထဲက အမြန်ပြကွက်တွေကို ကြည့်နေရသလိုလို၊ ခြေလှမ်းတွေ နောက်ပြန်ဆုတ် မျဉ်းပြိုင်(၂)ကြောင်းကို အတင်းကောက်ကြောင်းပေးပြီး ဆုံခိုင်းသလိုမျိုးပေါ့...။ လူရွှင်တော်တွေ မျက်နှာလို မဲ့နေရာကရီ၊ ရီနေရာကမဲ့သလို အဖြစ်အပျက်တွေက မြန်ဆန်လွန်းပြီး ရသမျိုးစုံ ခံစားနေရပါတယ်...။
ဖြစ်ပျက်ခဲ့ဘူးတဲ့ သမိုင်းတွေကလည်း ရှိခဲ့ဘူးလေတော့ ကျားလာတယ် ကျား၊ ကျားဆိုပြီး အကျည်စားသန်တဲ့သူရဲ့ စကားကို အယုံအကြည် မရှိတော့တဲ့အတွက် တကယ့်ကျားလို့ ပြောလာချိန်မှာ လက်မခံကြတာ မဆန်းပါဘူး...။ တကယ့်တကယ် စေတနာကောင်းနဲ့ လုပ်ဆောင်နေပါတယ် ပြောတာတောင် မယုံကြည်ကြတော့ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ အကျိုးတရားကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါ..။ ကျွန်တော်တို့ လူထုခေါင်းဆောင်ဘက်က ပွင့်လင်းရိုးသားမယ် ဆိုတာ အထူးပြောစရာ လိုမယ် မထင်ပါဘူး...။ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ မြင်ချင်တွေ့ချင်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေ မြင်ရတော့မှာလားဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက် ရောင်ခြည်လေး သန်းခဲ့ရသလို.. အကျဉ်းထောင်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ပြည်သူတွေအတွက် စတေးခံနေရတဲ့ မိမိတို့ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျခံနေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ မလွတ်မြောက်နိုင်သေးတာကို စဉ်းစားမိပြန်တော့ တကယ့်စစ်မှန်တဲ့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး ဟုတ်မှဟုတ်ပါ့မလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေက ပြန်ဝင်လာပြန်ပါတယ်...။ ရဟတ်စီးနေရသလို အပေါ်ရောက်လိုက် အောက်ရောက်လိုက် ဖြစ်နေရတာပါ...။
မြန်မာပြည် တနှံတလျား အကျဉ်းထောင်တွေထဲမှာ မတရားအကျဉ်းကျခံ နေရတဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ တရက်စောရင် စောသလို အမြန် လွတ်မြောက်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးလှသလို ဖြစ်ပေါ်လာမယ့် နိုင်ငံရေး ဖြစ်စဉ်တွေမှာလည်း... ပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခွင့် ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ယခုလောလောဆယ် သမ္မတကြီးရဲ့ အလွတ်သဘော ပြောဆိုခဲ့တဲ့ ပြည်ပရောက်နေသူတွေ မြန်မာပြည်ပြန်လာတာ၊ ပြန်မလာတာထက် ပြည်တွင်းကနိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားတွေ လွတ်မြောက်ဖို့က နံပါတ်တစ် အရေးကြီးပါတယ်...။ ကလေးမွေးခါနီး ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိန်းမတယောက်က ကလေးမမွေးသေးပဲ နောက်ဗိုက်တလုံး ထပ်ယူဦးမယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး သက်ရောက်မနေဘူးလား..။ ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းကျခံ နေရသူတွေ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် နတ်၊ လူ၊ သာဓုခေါ်ဆိုကြမှာ ဖြစ်သလို အများပြည်သူတွေရဲ့ ရင်ထဲက မတင်မကျဖြစ်နေတဲ့ မယုံကြည်မှုတွေကိုလည်း အထိုက်အလျောက် ဖြေဖျောက်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်...။
ပထမအဆင့် အနေနဲ့ သမ္မတကြီးရဲ့ ကျား၊ ကျား၊ ကျားလာပြီဆိုတဲ့ စကားကို ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူတွေ ယုံကြည်နိုင်ဖို့အတွက် ပြည်တွင်းက နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ချွင်းချက်မရှိ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်..။ ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီး လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ပြည်ပရောက်နေသူတွေ ပြည်တော်ပြန်လာနိုင်ပြီး တိုင်းပြည်တိုးတက်ရာ တိုးတက်ကြောင်း အတူတကွ လုပ်ဆောင်နိုင်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ လက်ခံယုံကြည်မှာ ဖြစ်ပါတယ်....။
လောလောဆယ်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြည်သူလူထုနဲ့ ပြည်ပရောက်နေသူတွေမှ သမ္မတကြီးတို့ အဖွဲ့ရဲ့ ယခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲတွေကို ယုံကြည်စိတ်ချစွာ လက်ခံနိုင်ဖို့ အတွက် သမ္မတကြီးမှ ပြည်တွင်းမှ အကျဉ်းကျခံ ရဟန်း၊ သံဃာများ၊ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များနဲ့ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေ အားလုံးကို အမြန်ဆုံး ချွင်းချက်မရှိ ပြန်လွှတ်ပေးပြီး သမ္မတကြီးအနေနဲ့ "မနေ့ကတွေ့တဲ့သူနဲ့ ဒီကနေ့တွေ့တဲ့သူ မတူပါဘူးကွယ်" ဆိုတဲ့သီချင်းလေးကို လက်တွေ့ သက်သေပြပေးဖို့ တောင်းဆိုလိုက်ရပါတယ်..။
မူရင်း ။ ။ ဒီမိုဝေယံ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 12:11 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက ကြီးမှူးကျင်းပသည့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ရခြင်းမှာ စီးပွားရေးပညာရှင် ဦးမြင့်က ဖိတ်ကြားသောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ယနေ့ ပြောလိုက်သည်ဟု 7Day သတင်းဂျာနယ်၏ သတင်းတပုဒ်တွင် ဖော်ပြထားသည်။ ဦးမြင့်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သိကျွမ်းသူတဦး ဖြစ်သည့်အပြင် သမတဦးသိန်းစိန်၏ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အကြံပေးအရာရှိလည်း ဖြစ်သည်။
"မနေ့က ခေါင်းမူးနေလို့ နေပြည်တော်ကို သေချာမကြည့်လိုက်ရဘူး။ အခု မပြန်ခင်မှ လိုက်ကြည့်ရမယ်"ဟု ဆိုသည်။
ဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ရန်ကုန်သို့ ပြန်သွားခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ယမန်နေ့က သမ္မတဦးသိန်းစိန်နှင့်ဒေါ်စုတို့ တွေ့ဆုံပုံကို အစိုးရမီဒီယာများတွင်လည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
သူတို့ နှစ်ဦး၏ တနာရီကြာဆွေးနွေးပွဲနှင့် ပတ်သက်ပြီး "မတူကွဲပြားသော သဘောထားအမြင်များ ဘေးဖယ်ထားပြီး နိုင်ငံနှင့် ပြည်သူလူထုအတွက် အမှန်တကယ်အကျိုးရှိစေမည့် ဘုံအကျိုးစီးပွားများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မည့် အလားအလာများအား ရင်းနှီး ပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်" ဟု ဖော်ပြထားသည်။
သူတို့နှစ်ဦး ဆွေးနွေးသည့်ရုံးခန်းအတွင်း ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဓာတ်ပုံချိတ်ဆွဲထားခြင်းကို မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံတွင် တွေ့မြင် သတိပြုမိသူတိုင်းက အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ပုံသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ကန့်သတ်ထားသည့် ရုပ်ပုံဖြစ်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ဓာတ်ပုံကို စာနယ်ဇင်းများတွင် ပိုမို ပွင့်လင်းစွာ ဖော်ပြနိုင်ခဲ့သည်။
အစိုးရ၏ ထူးခြားသော ခြေလှမ်းများကို မြန်မာ့နိုင်ငံရေးလောကသားများက အံ့သြတကြီး ကြိုဆိုခဲ့ကြပြီး နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများပြန်လွှတ်ပေးခြင်းကဲ့သို့သော လုပ်ရပ်များကို မျှော်လင့်ကြောင်း ပြောဆိုခဲ့ကြသည်။
အစိုးရရင်ဆိုင်နေရသည့် အခက်အခဲများ ပြေလျော့စေရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံပြခြင်းဖြစ်ပါက
"နာတာရှည်ရောဂါကို ခဏတာသက်သာရန် သုံးသည့် ဆေးမြီးတိုများသာ ဖြစ်နေမည်" ဟု Yangon Press International သတင်းအုပ်စု၏ သုံးသပ်ချက်ဆောင်းပါးတစောင်တွင် ယနေ့ ရေးသားထားသည်။
"အရပ်သားအစိုးရသစ်၊ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင် နှင့် တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်များ တစ်စားပွဲတည်းထိုင်ကာ ဆွေးနွေးပွဲများ စတင်နိုင်မည်ဆိုလျှင်တော့ မြန်မာ့နိုင်ငံရေးသည် တကယ်ပင် စားပွဲဝိုင်းပေါ် ရောက်လာပြီဟုဆိုနိူင်မည်" ဟု ထိုဆောင်းပါးတွင် ရေးထားသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အခမ်းအနားစတင်ချိန် နံနက် ၉ နာရီတွင် ရောက်ရှိလာကာ ခမ်းမအတွင်း ရှေ့ဆုံးခုံတန်းတွင် စီးပွားရေးပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်သော ဒေါက်တာဦးမြင့်နှင့် ပါမောက္ခဒေါ်ရီရီမြင့်တို့ကြားတွင် နေရာယူကာ စာတမ်းနှစ်စောင်ဖတ်ကြားမှုကို နားထောင်ခဲ့သည်။ (ဓာတ်ပုံနှင့်စာသား 7Day ဂျာနယ်)
ခေတ္တနားချိန်တွင် ကော်ဖီ၊ မုန့်တို့ဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံရာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကလည်း ထိပ်ဆုံး အထူးပုဂ္ဂိုလ်ဝိုင်းတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအချို့နှင့်အတူ မိနစ် ၃၀ နီးပါးစကားဝိုင်းဖွဲ့ခဲ့ကြောင်း အစည်းအဝေးရောက်နေသော 7Day News သတင်းထောက်က သတင်းပေးပို့သည်။ (ဓာတ်ပုံနှင့်စာသား 7Day ဂျာနယ်)
"စက်မှု(၁)၊ (၂) ၀န်ကြီး ဦးစိုးသိန်း၊ မီးရထားဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း၊ ဆက်ဆံရေးဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြည်၊ ဦးမြင့်၊ ပါမောက္ခဒေါ်ရီရီမြင့်နဲ့ နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေးတို့တွေနဲ့ တစ်ဝိုင်းတည်းအတူထိုင်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေးတစ်ယောက်ပဲ စစ်ဝတ်စုံနဲ့တွေ့ရပါတယ်။ သူတို့အားလုံး ရယ်လိုက်မောလိုက်နဲ့ တော်တော်ရင်းရင်းနှီးနှီးစကားပြောကြတာတွေ့ရတယ်။ စကားပြောပြီးဝိုင်းကထမှ တက်ရောက်လာကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့အတူ ဓာတ်ပုံတွဲရိုက်ကြတယ်။ ပညာရှင်အချို့လည်း ပါ ပါတယ်။ ဦးဇော်ဇော်တို့ ဦးဝင်းအောင် တို့ကိုလည်း တွေ့ရတယ်"ဟု ဆွေးနွေးပွဲပထမပိုင်းအပြီး ခေတ္တနားချိန်မြင်ကွင်းကို သတင်းထောက်က တယ်လီဖုန်းမှတစ်ဆင့် ပေးပို့ပြောကြားသည်။ (ဓာတ်ပုံနှင့်စာသား 7Day ဂျာနယ်)
ဒေါ်စု နှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီး ဗိုလ်ချုပ်သိန်းဌေး (ဓာတ်ပုံ - getty images)
(ဓာတ်ပုံ - AP)
မူရင်း ။ ။ မိုးမခ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:16 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
မလေးရှားရောက် မြန်မာပြည်သားများအရေး ရတက်မအေး
ယခုတစ်လော အထူးရေပန်းစား နေသည့် နေပြည်တော် လွတ်တော်သို့ စီးပွားရေး ညီလာခံ တက်ရောက်နေသည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သတင်းနှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ကမ်းလှမ်းချက်များ ထုတ်ပြန်ကြေငြာနေသည့် ဦးသိန်းစိန်၏ သတင်းများ ဟိုးလေးတစ်ကျော် ဖြစ်နေချိန်မှာ မိမိတို့ ပြည်တွင်း လွင်ပြင် ၀ိုင်းတော်သားများမှ youtube ရှိ သတင်းမျိုးစုံကို ဖတ်ရှုလေ့လာရင်း မိမိတို့ ထုတ်ပြန်ရမည့် သတင်းများထဲတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသား အားလုံး၏ ဒုက္ခရောက်စေမည့် သတင်းဆိုးကြီးကို ရတက်မအေးဘွယ် ဖတ်ရူ့နေရပေသည်။
အကြောင်းရင်းမှာ …. နိုဝင်ဘာလ (၁)ရက်၂၀၁၁နေ့မှ စတင်မည့် မလေးရှားနိုင်ငံ လူဝန်မူ့ ကြီးကြပ်ရေး၊ ပြည်ထဲရေး၊ ရဲ့တပ်ဖွဲ့နှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် နိမ်နှင်းရေး အထူးစစ်ဆင်ရေးတွင် မလေးရှားနိုင်ငံရောက် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကို work permit ရှိမရှိ စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ရာတွင် ၄င်းတို့က အချိန်မရွေး ပုံမှန်စစ်ဆေးခွင့်၊ ရှောင်တခင် စစ်ဆေးခွင့်နှင့် စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းခွင့်နှင့် ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင်ခွင့် ပြစ်ဒဏ်ပေးခွင့် တို့ကို မည်သည့် မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးကို မဆို၊ တိုင်းရင်းသားအားလုံးကိုမဆို ၊ဒုက္ခသည် အားလုံးကိုမဆို အချိန်းမရွေး ၊ အခါမဆိုင်း ၄င်းတို့လိုသလို ဥပဒေကို လက်တစ်လုံးကြား ဆွဲယူပြီး ဒဏ်ခတ် ပြစ်ဒဏ်ပေးအရေးယူ ဒုက္ခရောက်အောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သဖြင့် မိမိတို့ ပြည်တွင်းရှိ လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများအနေဖြင့် ရတက်မအေးဖြစ်မိကြောင်း …………
မူရင်း ။ ။ လွင်ပြင်ဝိုင်းတော်သားများ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 6:52 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ကြပ်ပြေး (နေပြည်တော်) တွင်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့အပေါ် ပြည်တွင်းရှိ အငြိမ်းစား တပ်မတော်အရာရှိကြီး တစ်ဦးအား စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အားဝက်ဆိုက်ဒ်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ရာမှာ ယခုတလော ဘေးကြပ်နံကြပ်ဖြစ်နေတဲ့ အစိုးရသစ်ရဲ့ ထွက်ပေါက်ဟာ မီးရှူးတန်ဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
မေး - မကြာမီကပြီးဆုံးသွားတဲ့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ ဖြစ်စဉ် ကြားသိရသလောက် ရှင်းပြပေးပါ။
ဖြေ - ကျနော်တို့ လက်လှမ်းမှီသရွေ့ တပည့်များကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းကြည့်ရာမှာ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ရုံးခန်းတွင် ထူးခြားချက်အနေနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံအား နိုင်ငံတော် ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးအဖြစ် ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ နံရံတွင် အခြားသမ္မတများရဲ့ ဓါတ်ပုံများနှင့်အတူ ယှဉ်တွဲ ထိုးတင်ထားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်က ဦးသန်းရွှေ အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဗိုလ်ချုပ်နေဝင်း ဓါတ်ပုံများကို ဇွတ်အတင်း ဖြုတ်ခိုင်းခဲ့ဘူးပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား စည်းရုံးလိုလို့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ဓါတ်ပုံ ပြန်တင်တာဖြစ်တယ်။ ဦးသိန်းစိန်ကတော့ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ချွတ်ချုံကျတဲ့အချိန်မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နှင့် နိုင်ငံတကာက ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ စီးပွားရေး Section ကို ရုတ်သိမ်းပေးရေး နိုင်ငံတကာအား တိုက်တွန်းပေးဖို့ရယ်၊ ကမ္ဘာ့ဘဏ်နှင့် နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံပုံငွေ အဖွဲ့က မြန်မာနိုင်ငံအား ထောက်ပံ့ကူညီဖို့ရယ်၊ ဒေါ်လာငွေကြေး လဲလှယ်နှုန်း သတ်မှတ်ပြင်ဆင်ရေး အပါအဝင် ငွေမာ အဖြစ်ထားရှိရေး အနောက်နိုင်ငံများက ကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့ စည်းရုံးပေးရေး စတာတွေပြောဆိုနိုင်ပါတယ်။
မေး - ယခုတလော အစိုးရသစ် အကြပ်အတည်း ဖြစ်နေတာ ကြားတယ်။ ဗိုလ်မှူးကြီးရဲ့ ထင်မြင်ယူဆချက်ကို ရှင်းပြပါ။
ဖြေ - အစိုးရသစ်အနေနဲ့ သဘာဝဘေးအန္တရယ် ရေကြီးတဲ့ဒဏ် ဆန်ရေစပါးပေါများတဲ့ ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းအများစု ရေလွှမ်းမိုးခံရတဲ့အပြင် ဒေါ်လာဈေး မကြုံဘူးအောင် စံချိန်တင် ထိုးကျသွားတာကြောင့် စီးပွားရေး အကြပ်အတည်း ဖြစ်နေတာရယ်၊ ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်လုနီးနီး မကြုံစဖူး မြောက်ပိုင်းမှသည် တောင်ပိုင်းအထိ တပ်မတော်က စစ်မျက်နှာများ ဖြန့်ကျက်ကာ ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ နေရတာရယ်၊ အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့အား စစ်ဆက်တိုက်ရမလို၊ ငြိမ်းချမ်းရေးလေသံ မပွင့်တစ်ပွင့် ပြောရမလို ရွေးချယ်ရ ခက်နေတာရယ်၊ အာဆီယံဥက္ကဌ ဖြစ်ဖို့လေ့လာသူ အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား ဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးမှ ဆိုင်းငံ့ထားတာရယ်၊ အစိုးရသစ်ရဲ့ ကြွေးကြော်သံ တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အဂတိလိုက်စားမှု ကင်းရှင်းရေး သန့်ရှင်းသော အစိုးရဖြစ်ရေးအတွက် စံပြလုပ်ဆောင်မှုအဖြစ် တပ်မတော်အတွင်း တိုင်းမှူးနှင့်အထက် ဗိုလ်ချုပ်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီး အချို့ကို ဖယ်ရှားတဲ့အပေါ် တပ်တွင်း မကျေနပ်မှုများစတဲ့ စတဲ့အကြပ်အတည်းတွေရှိတယ်ဗျာ။
မေး - အပစ်ရပ် တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အပေါ် အစိုးရသစ်ရဲ့ ဆက်ဆံပြောဆိုနေမှုများအပေါ် ဗိုလ်မှူးကြီး ဘယ်လိုမြင်သလဲ..?
ဖြေ - အစိုးရသစ်အနေနဲ့ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားတွေအပေါ် ပြတ်သားတဲ့ မူဝါဒမျိုး မရှိသလို သံတမန်ရေးရာ စကားလုံးများ သုံးနှုန်းမှုအားနည်း နေတာတွေ့ရတယ်။ သမ္မတ တစ်ဦးအနေနဲ့ လက်လွှတ်စပယ် K.I.A အပေါ် မပြောသင့်ဘူးဗျ၊ ယခင်အစိုးရလက်ထက်ကတောင် နိုင်ငံတော်ရဲ့ အဆင့် (၂) ရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်လို လူမျိုးက လုံခြုံရေး အစောင့်အရှောက် ဘေးဖယ်ထားပြီး တိုင်းရင်းသား နယ်မြေထဲသို့ ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်တဲ့အနေနဲ့ ရဲတင်းစွာ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့တာမျိုး လုပ်ခဲ့သေးတာဘဲ။ ခက်တာက သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ စစ်ဦးစီး လုပ်သက်ဘဲ စစ်ရုံးမှာ တောက်လျှောက် နေခဲ့တာများတာမို့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရာမှာ တုံ့ဆိုင်း နှေးကွေးနေတာ တွေ့ရတယ်။ အစိုးရသစ် အဖွဲ့အတွင်း တင်းမာတဲ့ အုပ်စုများရဲ့ လေသံများက ဦးသိန်းစိန်အပေါ် လွှမ်းမိုးနေတယ်။ သူတို့ရဲ့ တသမတ်တည်း စွဲကိုင်ထားတဲ့ အယူအဆက တိုင်းရင်းသား အဖွဲ့တွေကို ဘယ်တော့မှ တစုတစည်းထဲ အစိုးရသစ် အနေနဲ့ တွေ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တိုင်းရင်းသားအားလုံး ပေါင်းတွေ့ရင် အင်အားစု ကြီးမားလာမှာဖြစ်လို့ အစိုးရသစ် လက်ရှောင်တာဖြစ်တယ်။
မေး - ဒီတော့ ဗိုလ်မှူးကြီးအနေနဲ့ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်း အပေါ် အစိုးရသစ်ရဲ့ နိုင်ငံရေး မဟာဗျူဟာ ဘယ်လို သုံးသပ် သလဲ ?
ဖြေ - ယခုတလော ခေတ်စားနေတဲ့ သုံးပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေးကို အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားတွေနှင့် တစုတစည်းတည်း တွေ့ဖို့တောင် မလိုလားတဲ့ စစ်အာဏာရှင် အသွင်ပြောင်း အစိုးရသစ်က စိတ်ကူးထဲတောင် ထည့်မှာမဟုတ်ဘူး၊ နှစ်ပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးရေးကို အစိုးရသစ်က ဦးစွာ ညှိနှိုင်းပြီးမှ ကျန်တဲ့တစ်ပွင့်ကို အပေါ်စီးမှ ကိုင်တွယ်မှာ ဖြစ်တယ်။ ယခင်နအဖ လက်ထက်က NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဦးစွာ မဆွေးနွေးဘဲ အပစ်ရပ်တိုင်းရင်းသားများကို တဖွဲ့ခြင်း ခွဲထုတ်စည်းရုံးခဲ့ပြီးမှ တိုင်းရင်းသား အားကို ရယူကာ NLD အား အပေါ်စီးမှ ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်တယ်။ ယခုတော့ ပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် NLD ကို ဦးစွာ ဆွေးနွေးကာ တိုင်းရင်းသားတွေကို အပေါ်စီးမှ ကိုင်တွယ်မှာဖြစ်တယ်။
မေး - ဗိုလ်မှူးကြီး ဆိုလိုတာက အစိုးရသစ်ရဲ့ထွက်ပေါက်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖြစ်နေသလား ?
ဖြေ - အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ရန် နည်းလမ်းအနေဖြင့် NLD နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စည်းရုံးမှာလား၊ NLD ကို ဖယ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအနေနဲ့ စည်းရုံးမှာလား ဆိုပြီး နည်းလမ်းနှစ်သွယ် ရှိပါတယ်။ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ အရိုးစွဲ အယူဆအတိုင်း အင်အားနည်းလေ ကောင်းလေမို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တစ်ဦးတည်းကိုသာ ရွေးထုတ်ပြီး ဖြစ်နိုင်ရင် NLD နှင့် ကွဲသွားစေချင်တယ်။ နိုင်ငံတကာရဲ့ထောက်ခံမှုရနေသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အစိုးရသစ်က လိုလားနေတဲ့ စီးပွားရေး ပိတ်ဆို့မှု Section အထိုက်အလျောက် လျော့ပါးသွားလိုပါတယ်။ အစိုးရသစ်က တိုင်းရင်းသား အရေးကိစ္စများ ကိုင်တွယ်ဖို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖြေရှင်းခိုင်းဖို့ လောလောဆယ် အကူအညီတောင်းမှာ မဟုတ်သေးဘဲ နိုင်ငံရေး ကျားကွက် ရွှေ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကို အချိန်အတိုင်းအတာ တစ်ခုထိ ပစ်ထားမှာ ဖြစ်ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ပြေလည်မှု ရရှိရေးအတွက် နှစ်ပွင့်ဆိုင် ဆွေးနွေးရေးကို ဆက်လက် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အစိုးရသစ်ရဲ့လေသံက ငြိမ်းချမ်းရေးတံခါး မပွင့်တစ်ပွင့် ဖွင့်ထားတယ်။ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆိုင်ရာ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲများ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အပါအဝင် ပြည်သူလူထု တရပ်လုံး ပါဝင်နေသယောင် လှုပ်ရှားမှု သဏ္ဍန် ဖော်ထားပြီး တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်များကိုတော့ စစ်မက်လိုလားသူ အကြမ်းဖက်သမားများအဖြစ် နိုင်ငံရေး ထိုးစစ် ဆင်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား သူတို့ရဲ့ ထွက်ပေါက်အဖြစ် အသုံးချထားတယ်ဖြစ်တယ်ဗျာ။
မူရင်း ။ ။ ဖိုးတရုတ်ကင်း
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 4:11 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တွေ့ဆုံမှု နှင့် နေပြည် တော် စီးပွားရေးအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ (ဓာတ်ပုံ)
မူရင်း ။ ။ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 11:53 AM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 10:50 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
ဒေါ်စုနှင့် ဦးသိန်းစိန် နေပြည်တော်မှာယနေ့ တွေ့ ဆုံကြ
နေပြည်တော်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ဒီမိုကရေစီ ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်တို့ ယနေ့ တွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်း သတင်းရ ရှိသည်။
ယနေ့ နေ့လယ်က နေပြည်တော်သို့ ဆိုက်ရောက်လာသော ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတဦးသိန်းစိန်က စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ မတက်ရောက်ခင် ခေတ္တ တွေ့ဆုံပြီးနောက်တွင် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား နေပြည်တော်အတွင်း လှည့်လည် ကြည်ရှုရန် တိုက်တွန်းကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲသို့ မတက်ရောက်ဘဲ နေပြည်တော်တွင် အစိုးရ၏ လုံခြုံရေး စောင့်ရှောက်မှုဖြင့် လှည့်လည်ကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ညနေ ၄ နာရီတွင် သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို သမ္မတအိမ်တော်တွင် ထပ်မံ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထိုတွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲမှာ ညနေ ၅ နာရီတွင် ပြီးဆုံးခဲ့ပြီး မည်သည့်အကြောင်းအရာများ ဆွေးနွေးကြသည်ကိုမူ မသိရှိရသေးပေ။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲပြီးနောက် သမ္မတကတော်နှင့် အစိုးရတာဝန်ရှိသူများက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ရုံးအဖွဲ့ကို ၁၅ မိနစ်ခန့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန်က ယနေ့ည တည်ခင်းဧည့်ခံမည့် ညစာစားပွဲသို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဖိတ်ကြားထားကြောင်းလည်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ယနေ့နံနက် ၈ နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်ကမှ နေပြည်တော်သို့ ရုတ်တရက် သွားရောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ မနက်ဖြန်တွင် ရန်ကုန်မြို့သို့ ပြန်လည်ထွက်ခွာမည် ဖြစ်သည်။
“ညီလာခံတော့ တက်ဖြစ်လိမ့်မယ် မထင်ဘူး” ဟု ၎င်းက ဆိုသည်။
အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက်နေသည့် Myanmar Egress ၏ အမှုဆောင် တဦးဖြစ်သူ ငါးလုပ်ငန်းအဖွဲ့ချုပ်မှ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင် ဦးလှမောင်ရွှေကမူ မြန်မာနိုင်ငံရေးတွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍ၌ ပါဝင်နေသည့် လူများအနေဖြင့် မတူသည်ကို ဘေးဖယ်၊ တူသည်ကို ဝိုင်းဝန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းမှာ ကောင်းမွန်ကြောင်း ပြောသည်။
သမ္မတဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် နိုင်ငံစီးပွားရေး တိုးတက်မှုကို လိုလားကြောင်း၊ တိုင်းပြည်စီးပွားရေး ကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နေသည့် လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများနှင့် အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးမှုများလည်း ပြီးခဲ့သည့် အင်္ဂါနေ့ညက ပြောဆိုခဲ့သေးကြောင်း ဦးလှမောင်ရွှေက ဆိုသည်။
ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားပြု ကော်မတီ (CRPP) ၏ အတွင်းရေးမှူး ဦးအေးသာအောင်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှာ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင်၊ ပါတီတရပ်၏ ခေါင်းဆောင် ဖြစ်သည့်အတွက် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေဖြင့် စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲ ဖိတ်ကြားခြင်းထက် နိုင်ငံရေး စားပွဲဝိုင်းသို့သာ ပိုမိုဖိတ်ကြားသင့်ကြောင်း ထောက်ပြဝေဖန်သည်။
“အခုဆွေးနွေးပွဲက စီးပွားရေး ဆွေးနွေးပွဲလေ။ တတ်သိနားလည်တဲ့ စီးပွားရေး ပညာရှင်တွေ၊ စီးပွားရေး သမားတွေနဲ့ ပိုသင့် တော်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပွားနေသည့် စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး ပြဿနာအရပ်ရပ်ကို ဖြေရှင်းနိုင်ရန် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးပွဲများ ပြုလုပ်ပြီး ဖြေရှင်းစေချင်ကြောင်း ဦးအေးသာအောင်က ပြောသည်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 10:26 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
အမှောင်တိုက်မှ တပ်မတော်သားများ ရုန်းထွက်နိုင်စေရေး - အပိုင်း (၅)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆက်နွယ်ပြီး မြန်မာ့တပ်မတော် အတွင်းတွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ အခန်းကဏ္ဍကို တဖြည်းဖြည်း မှေးမှိန်အောင် စနစ်တကျ စီမံဆောင်ရွက် ညွှန်ကြားခဲ့ပုံ၊ တပ်မတော် အတွင်းတွင် အာဇာနည်နေ့၌ပင်လျှင် အခမ်းအနားများ မပြုလုပ်ခိုင်းပုံ၊ တပ်မတော် အတွင်း၌လည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီးဖြစ်၍သာ နာမည်ကြီးကြောင်း ၊ အနောက်နိုင်ငံသားနှင့် လက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီး သား (၂) ဦးပင် ထွန်းကားနေပြီ ဖြစ်သောကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံကို ချစ်သည် ဆိုသည်မှာ လုံးဝ မဟုတ်ကြောင်း၊ သူမရဲ့အမေ ဒေါ်ခင်ကြည် အိန္ဒိယတွင် သံအမတ်ကြီးတာဝန် ထမ်းဆောင်ခဲ့စဉ်က သူမအား တပ်မတော်အရာရှိတစ်ဦးနှင့် စေ့စပ်ပေးစေလိုကြောင်း ဦးနေ၀င်းကတစ်ဆင့် ဦးနုက ပြောဆိုခဲ့တာကို ဒေါ်ခင်ကြည်က ငြင်းပယ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုနေကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ဦးကြည်မောင်ကို မထိန်းဘဲ ဦးကြည်မောင်ရဲ့ ဒုဗိုလ်မှူးကြီးအထက် မယူဘူး ဖယ်ရှားပစ်မယ်လို့ ကြိမ်းမောင်းသံကို စစ်အာဏာရှင်တွေက တပ်မတော်သားများ အထင်လွှဲအောင် ပုံကြီးချဲ့ပြီး ရိုက်သွင်းနေကြောင်း၊ သူမသည် အနောက်နိုင်ငံကြီးများရဲ့ အလိုအရ မြန်မာနိုင်ငံကို အရင်းရှင် ဒီမိုကရေစီပုံစံသို့ သွတ်သွင်းနေကြောင်း၊ တနည်းအားဖြင့် ခေတ်သစ် ကျွန်ပြုနေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ခေတ်သစ် နယ်ချဲ့ကိုလိုနီလို့ စတန့်ထွင် ခေါ်ဝေါ်ပြီး တပ်မတော်အတွင်း အဆင့်ဆင့်မှ ဆွေးနွေး ဟောပြောမှုများ ပြုလုပ်ကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန့်ကျင်ရေးကို နည်းမျိုးစုံဖြင့် ကျင့်သုံးခဲ့ကြောင်း၊ ၁၉၉၆ ခုနှစ်မှစ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေဟာ NLD ချေမှုန်းရေးအပြင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဆန့်ကျင်ရေးကို တပ်မတော်အတွင်း၌ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး အခေါ်အဝေါ်ကအစ မိုက်မိုက်ရိုင်းရိုင်း ခေါ်စေကာ လုပ်ကြံဇာတ်လမ်းမျိုးစုံ ဖန်တီး၍ တိုက်ရိုက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ကိစ္စများကို တပ်မတော်တွင်းသို့ နည်းမျိုးစုံဖြင့် မဟုတ်မမှန် ၀ါဒဖြန့်ခဲ့ကြောင်း၊ နိုင်ငံတကာမှ ပေးသောဆုများနှင့် ပတ်သက်လို့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၄င်းငွေများကို ကိုယ်ကျိုးသုံးစွဲပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား အကျိုးအတွက် ဘာမှလုပ်တာ မရှိကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံသားများ စားဝတ်နေရေး ကြပ်တည်းစေရန် အတွက် နိုင်ငံခြား ခရီးသွားများ မြန်မာနိုင်ငံသို့ မလာရန် နိုင်ငံတကာအား လှုံ့ဆော်ခြင်းနှင့် နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများကို တားဆီးခြင်းတို့ကို မြန်မာနိုင်ငံသားများ ဒုက္ခရောက်အောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မှ ဆောင်ရွက်နေကြောင်းဖြင့် စတာတွေကို တပ်မတော်တွင်း စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး ၀ါဒဖြန့်မှုများ ပြုလုပ်ထားခဲ့ပါတယ်။
ဒီလိုဝါဒဖြန့်မှုကြောင့် စစ်အာဏာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ရဲ့ ဆိုက်ကိုလိုဂျီ Warefare စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး နည်းဗျူဟာထဲတွင် နစ်မြောနေအောင် ရိုက်သွင်းထားရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် အမြင်မကြည်လင်မှု၊ တပ်မတော်အပေါ် သဘောထား မှန်ကန်ခြင်း မရှိဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား အဖွဲ့အနေဖြင့် ယနေ့တပ်မတော်သားများအား အမှောင်တိုက်မှ ရုန်းထွက်နိုင်စေရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းနှင့် သဘောထားခံယူချက်များကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ယနေ့တပ်မတော်တွင် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြီး ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် အပတ်စဉ် တင်ပြသွားဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တို့ရဲ့ မီဒီယာစီစစ် တည်းဖြတ် ပိတ်ဆို့ထားမှုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားများကို တပ်မတော်သားများ ဖတ်ရှုသိမြင်ပြီးဆိုပါက ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းပေါ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် ပြည်သူလူထုနှင့် လက်တွဲဖို့ တိုက်တွန်း လိုက်ရပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေ အနေနဲ့ တပ်မတော်သားများကို စည်းရုံးမှိုင်းသွင်းထားတဲ့ နောက်တစ်ချက်မှာ အမျိုးသားနိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် တပ်မတော်မှ အမြဲတမ်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရေး ဖြစ်တယ်။ ၁၉၉၇ ခုနှစ် န၀တ အတွင်းရေးမှူး (၂) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်ဦးက ကာကွယ်ရေး ၀န်ကြီးဌာန၊ စခန်းရုံး ခန်းမကြီးတွင် တပ်မတော်သားများအား မိန့်ခွန်းတစ်ရပ် ပြောကြားရာမှာ နိုင်ငံတော်အာဏာကို အရပ်သားတွေအား မလွှဲတော့ဘဲ ဒို့တပ်မတော်က ဆက်လက် အုပ်ချုပ်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ ဒါ့အပြင် အခြေခံဥပဒေ ရေးဆွဲရာမှာ တပ်မတော်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ပိုမိုခိုင်မြဲဖို့ အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ပါဝင်သွားရေး ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားမှာဖြစ်ပြီး အခြေခံဥပဒေ ပြင်လို့ မရအောင်လည်း စီမံသွားမှာဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် နိုင်ငံတကာနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ ဒီမိုကရေစီ အသွင်ကူးပြောင်းရေးကို လက်ခံမှာ မဟုတ်ဘဲ အာဏာရှင်စနစ်အား အသွင်တစ်မျိုးဖြင့် ဖန်တီးသွားမှာ ဖြစ်တယ်လို့ တပ်မတော်အရာရှိတစ်ချို့က တီးတိုးဝေဖန်ကြပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး သူက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ တပ်မတော်ကို သိမ်းကျုံးပြီး အဆိုးမြင်ဝါဒ မြင်နေတယ်လို့ ပြောဆိုတာကြောင့် စစ်အာဏာရှင်တွေက တပ်မတော်နှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရန်တိုက်ပေးထားပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ တပ်မတော်အား ခုတုံးလုပ်ပြီး သူတို့ရဲ့ လုံခြုံရေး၊ ရပ်တည်ရေးအတွက် အကာအကွယ် အသုံးချသွားတာ ဖြစ်တာကို အရာရှိတစ်ချို့က ရိပ်မိခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကမ္ဘောဒီးယား ခမာနီခေါင်းဆောင်များ ခုံရုံးတင်ခံရတဲ့ ဖြစ်စဉ်များနှင့် ဦးနေ၀င်း ဇာတ်သိမ်းမလှပုံတို့ကို ၀ဋ်လည်မှာ ကြောက်ပြီး တပ်မတော်သားများ သေနတ်ပြောင်း မလှည့်စေရေးအတွက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ရန်သူအဖြစ် သဘောထားလာအောင် အကွက်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားညီလာခံ ကျင်းပခါနီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေဖြင့် NLD အား လွှတ်တော်သို့ တက်ခွင့်ပေးတာကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် တပ်မတော်သားများက စစ်အာဏာရှင်တွေ ပြောသလို အဆိုးကြီး မဟုတ်ကြောင်း သတိပြု လာခဲ့ပါတယ်။ မည်သို့ဆိုစေကာမူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ မိန့်ခွန်းပါ ကောက်နုတ်ချက်များ အရ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုကိုသာ ရည်ရွယ်ပြီး တပ်မတော်ကို ရည်ရွယ်တာ မဟုတ်ကြောင်း အောက်ပါအတိုင်း သိရှိရပါတယ်။
ပြည်သူလူထုရော၊ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုရော၊ အရင် ၁၉၈၈ ခုနှစ် ဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်မို့လို့ နာကျည်းပြီးတော့ တပ်မတော်ကို တိုက်ခိုက်တယ်ဆိုတာ လူတိုင်း အသိပါဘဲ။ ဒီတပ်မတော်၊ တပ်မတော်ဆိုပြီး တိုက်ခိုက်တာကို မကြိုက်လို့ ကျမက ဒီလိုခွဲခြားပြီးတော့ ပြောတာ။ တပ်မတော်ထဲမှာ အားလုံးဆိုးတာ မဟုတ်ဘူး။ ဆိုးတဲ့ လူတွေ ရှိသလို၊ ကောင်းတဲ့လူတွေလဲ ရှိတယ်။ တကယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒီလို တပ်မတော်နာမည်ပျက်စေတာက ကိုယ့်ရဲ့အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး အတွက် လုပ်နေတဲ့ လူနည်းစု လူတစုကြောင့်သာ ဖြစ်ပါတယ် ဆိုပြီးတော့ ကျမပြောခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ဘယ်သူလုပ်ခဲ့တာလဲ။ ဦးနေဝင်း လုပ်ခဲ့တာဘဲ။ ကျမ ထောက်ပြတာဘဲ။ ဦးနေဝင်းဟာ ၂၆ နှစ်အတွင်း မဆလပါတီ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး ဆိုတာ သူတယောက်ရဲ့ အာဏာတည်တံ့ ခိုင်မြဲရေးအတွက် လုပ်ခဲ့တာပါဘဲ။ အဲ့ဒီလို လုပ်တဲ့နေရာမှာ တပ်မတော်ကို သူ့ရဲ့ လက်ကိုင်တုတ်အနေနဲ့ သုံးခဲ့တယ်။ ဒီတော့ ကျမ ဒါကိုပြောခဲ့တာ။
ဦးနေဝင်းဟာ တပ်မတော်ကို မိမိရဲ့ အာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးအတွက် လက်ကိုင်တုတ်အဖြစ် သုံးခဲ့လို့ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူကြားမှာ စိတ်ဝမ်းကွဲရတယ်။ တပ်မတော်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာဟာ ကျဆင်းခဲ့ရတယ်။ ဒါ ကျမ ပြောခဲ့ တယ်။ မှန်တယ်။ ထပ်ပြီးပြောမယ်၊ ဒါ တပ်မတော် ပြိုကွဲရေးအတွက် မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်ကို အလွဲသုံး စားလုပ်ခဲ့တာ နာကျည်းလွန်းလို့ ကျမ ပြောတာ။ ဒီလို တပ်မတော်ကို အလွဲသုံးစား မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတာ ထုတ်ပြချင် လို့ ကျမပြောတာ။
တပ်မတော်ဟာ တနိုင်ငံလုံးအတွက် ဖြစ်ပါတယ်။ လူတယောက်အတွက် မဟုတ်ပါဘူး၊ လူတစုအတွက် မဟုတ်ပါဘူး ဆိုတာ ဖေဖေ တပ်မတော်ကို ထူထောင်ကတည်းက ပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စပါ။ ဒီအတိုင်းဘဲ ကျမ ဆက်ပြီး ပြောသွားမှာဘဲ။ အဲ့ဒီတော့ ဒီဟာပြောတာကို ဘယ်လို တပ်မတော် ပြိုကွဲအောင် လုပ်သလဲဆိုတာ ကျမ မေးရမှာဘဲ။ ဘာမှ တပ်မတော်ကို ပြိုကွဲချင်တဲ့စိတ် မပါပါဘူး။
(ရန်ကုန်မြို့၌ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒေါ်စုပြောကြားခဲ့သော ရှင်းလင်းချက်များထဲမှ…)
“ အာဏာရှင်စံနစ် မရှိသင့်ဘူးလို့ ကျမယုံကြည်တာ ကြာလှပါပြီ။ ကြာလှပါပြီ ဆိုတာ ဟိုးအရင် ၁၉၅၈ ခုနှစ် ပထမအကြိမ် စစ်အာဏာသိမ်းထဲက ကျမ သဘောမကျခဲ့ဘူး။ သဘောမကျရတဲ့ အကြောင်းရင်းကတော့ တပ်မတော်ဟာ နိုင်ငံရေးအာဏာသိမ်းဖို့ ဖေဖေက တည်ထောင်ထားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဖေဖေကိုယ်တိုင် နိုင်ငံရေး လုပ်တဲ့အခါ တပ်မတော်ထဲက ထွက်ပြီးမှ လုပ်ပါတယ်။ ဒီလို တပ်မတော်ထဲက ထွက်ပြီးမှ နိုင်ငံရေး လုပ်ခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းကတော့ အစဉ်အလာ ကောင်းစေချင်လို့ဘဲ။ တိုင်းပြည်တပြည်ကို လက်နက်အားကိုးပြီးတော့ အုပ်ချုပ်တယ် ဆိုတဲ့ အစဉ်အလာ မဖြစ်စေချင်လို့…”
မော်လမြိုင်မြို့ အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် အဖွဲ့ဝင်များအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ…
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 3:00 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
အမှောင်တိုက်မှ တပ်မတော်သားများ ရုန်းထွက်နိုင်စေရေး - အပိုင်း (၄)
စစ်အာဏာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ရဲ့ ဆိုက်ကိုလိုဂျီ Warefare စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး နည်းဗျူဟာထဲတွင် နစ်မြောနေအောင် ရိုက်သွင်းထားရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် အမြင်မကြည်လင်မှု၊ တပ်မတော်အပေါ် သဘောထား မှန်ကန်ခြင်း မရှိဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား အဖွဲ့အနေဖြင့် ယနေ့တပ်မတော်သားများအား အမှောင်တိုက်မှ ရုန်းထွက်နိုင်စေရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းနှင့် သဘောထား ခံယူချက်များကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ယနေ့တပ်မတော်တွင် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ်သုံးသပ်ပြီး ကဏ္ဍတစ်ရပ်အနေဖြင့် အပတ်စဉ် တင်ပြသွားဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေဟာ တပ်မတော်သားတွေအား ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး အထင်အမြင်လွှဲမှားအောင် ပိုမိုပြီး ပြင်းပြင်ထန်ထန် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပါမကျန် မှိုင်းတိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ ၁၉၈၈ လူထုအုံကြွမှု အရေးအခင်းအပေါ် ချော်လဲရောထိုင် အမှတ်ယူသူ ဖြစ်ကြောင်း၊ တပ်မတော်ဘယ်လောက်ဘဲ ကောင်းအောင်လုပ်လုပ် အဆိုးမြင် ၀ါဒနှင့် သိမ်းကျုံး မြင်တတ်သူဖြစ်ကြောင်း၊ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုနဲ့ တိုင်းပြည်နစ်နာအောင် ပြုလုပ်သူဖြစ်ကြောင်း၊ သူမရဲ့ နောက်ကွယ်တွင် အမေရိကန်ကဲ့သို့ အနောက်နိုင်ငံများက ကြိုးကိုင်ထားသူဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အား ခေါ်ရင်တောင်မှ အောင်ဆန်းစကားလုံးကို ဖြုတ်ကာ ဒေါ်စုကြည်လို့ ခေါ်ခိုင်းကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ NLD အဖွဲ့ဝင်များ သွေးလှူဖို့ စစ်ဆေးရုံကို လာရောက်ရင် လက်မခံဖို့လိုကြောင်း၊ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရေး လမ်းစဉ်ကို ကျင့်သုံးသူဖြစ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာ နိုင်ငံခြားသား ယူထားသူဖြစ်လို့ မည်သည့်နိုင်ငံမဆို ဥပဒေ ပြဌာန်းချက်အရ နိုင်ငံခေါင်းဆောင် ဖြစ်ထိုက်သူ မဟုတ်ကြောင်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အကျယ်ချုပ် ကျခဲ့စဉ်က သူမအတွက် သံရုံးမှ ပေးပို့သော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများနှင့် အတွင်းရေးများကို ဖောက်သည်ချခဲ့ကြောင်း၊ သူမခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာပါက တပ်မတော်ဟာ ကောင်းစားမှာ မဟုတ်ဘဲ အနှိမ်ခံဘ၀နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းသွားနိုင်ကြောင်း သွေးထိုး လှုံ့ဆော်ထားပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့ တပ်မတော်သားတွေကို ပြည်သူလူထုနှင့် နီးစပ်စေချင်ပြီး ပြည်သူလူထုနှင့် လက်တွဲရန် တိုက်တွန်းထားကြောင်း၊ တပ်မတော်အပေါ် သူမက သံယောဇဉ်ရှိကြောင်း၊ သူမရဲ့ဖခင် ထူထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်မို့ အမှန်တကယ် စေတနာရှိကြောင်း၊ ဂုဏ်သိက္ခာမြှင့်ပြီး တပ်မတော်ကောင်းအောင် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ကြောင်း သူမရဲ့မိန့်ခွန်းများက သက်သေထူပါတယ်။
“အခုဆိုရင် ဖြစ်နေတာက ပြည်သူလူထု ဆန္ဒကိုလည်း မလိုက်ဘူး။ ပြည်သူလူထုနဲ့ တပ်မတော်ကြားထဲမှာလဲ စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် အမျိုးမျိုး လုပ်နေကြတယ်။ ဒီလို စိတ်ဝမ်းကွဲအောင် လုပ်နေတာဟာ ပြည်သူလူထုက လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျမတို့ နိုင်ငံရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေကလဲ လုပ်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ တပ်မတော်ကို ကိုယ်ကျိုးအတွက် သုံးနေတဲ့သူများက လုပ်နေတာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလိုစနစ်မျိုးကို ကျမတို့အားလုံးက အတိုက်အခံ လုပ်ရမယ်။ တပ်မတော် ဆိုတာ ပြည်သူလူထုနဲ့ လက်တွဲပြီးလုပ်ဖို့ ကျမအဖေက တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုကို ကာကွယ်ဖို့၊ တိုင်းပြည်ရဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာကို စောင့်ရှောက်ဖို့ဆိုပြီး ဒီတပ်မတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက်ညှင်းပန်းဖို့ ဆိုပြီး ဖေဖေက ဖွဲ့ခဲ့တာ လုံးလုံးမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီတော့ တပ်မတော်နဲ့ ပြည်သူလူထု လက်တွဲချင် နေတာကို လက်မတွဲဖြစ်အောင် လုပ်တဲ့သူများမှာ အင်မတန် တာဝန်ရှိပါတယ်။…"
၁၉၈၈ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် မုဒုံမြို့နယ် ကမာကေးကျေးရွာ အဖွဲ့ချုပ်ရုံး ဆိုင်းဘုတ် တင်ပွဲ၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားခဲ့သော မိန့်ခွန်းမှ...
“အခု တပ်မတော်နဲ့ ပတ်သက်လို့လဲ ကျမ တခုပြောချင်ပါတယ်။ ကျမက အရင်တုန်းက တပ်မှူးဟောင်းကြီးတွေက အင်မတန် ကောင်းပါတယ် ဆိုတော့ အခု တပ်မတော်ကို စော်ကားနေတဲ့ သဘောထားနဲ့ ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတပ်မတော်ဟာ ဖေဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်မို့လို့ ကျမက အင်မတန်မှ ကောင်းစားစေချင်တယ်။ ဒီတပ်မတော်ကို ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ ပြည့်စုံစေချင်တယ်။ ပြည်သူလူထုရဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်တယ်။ ပြည်သူလူထုနဲ့ လက်တွဲပြီးတော့ တိုင်းပြည် အကျိုးဆောင်တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်စေချင်တယ်။ အဲ့ဒီတော့ ကျမမှာ တပ်မတော်ဟာ တနေ့နေ့တော့ ဒီအတိုင်းဘဲ ဖြစ်ရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ထားရှိပါတယ်။”
(ငပုတော ခရီးစဉ်၌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းမှ...)
“တပ်မတော်ဆိုတာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အစေခံဖြစ်ဖို့ဆိုတာ ဖေဖေ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြည်သူလူထုဟာ တပ်မတော်ရဲ့ အစေခံ မဖြစ်စေရဘူး။ တပ်မတော်ဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အစေခံ ဖြစ်ရမယ် ဆိုပြီးတော့ ဒီလိုရည်မှန်းချက်နဲ့ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ နောက်တခါ ထပ်ပြီးတော့ တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းတဲ့ အခါ ကျမ နည်းနည်းမှ မလိုလားခဲ့ပါဘူး။ ကျမ တပ်မတော်အပေါ်မှာ အင်မတန် သံယောဇဉ် ရှိပါတယ်။ အင်မတန် စေတနာ ရှိပါတယ်။ ကျမအဖေ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ တပ်မတော်ပါ။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ဖေဖေတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း ဖြစ်စေချင်တယ်။ ဖေဖေ့ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း ပြည်သူလူထုတို့ အားကိုးရာ၊ လဲလျှောင်းရာ၊ ကိုးကွယ်ရာ တပ်မတော်ကြီး ဖြစ်စေချင်တယ်။... တပ်မတော်တခုဟာ ဘယ်လောက်ဘဲ အင်အားကောင်းကောင်း၊ ပြည်သူလူထုရဲ့ ထောက်ခံမှု မရှိရင် ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ တပ်မတော်တခု မဖြစ်နိုင်ဘူး။…”
(မော်လမြိုင်မြို့နယ် အဖွဲ့ချုပ်ရုံးတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောကြားသော မိန့်ခွန်းမှ...)
“ကျမ တပ်မတော်အပေါ်မှာ စေတနာရှိတယ်ဆိုတာ ကျမ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီး ပြောဝံ့တယ်။ ကျမ မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ တပ်မတော်အပေါ်မှာ မှန်ကန်တဲ့ စိတ်ထား ထားပြီး လုပ်သွားမယ် ဆိုတာ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ကြီး ပြောနိုင်ပါတယ်။ ဒီ တပ်မတော်ကို ထူထောင်လာတုံးက ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့ အဖွဲ့ကြီးဖြစ်အောင် ထူထောင်လာတာ။ ပြည်သူလူတုနဲ့ စည်းစည်းလုံးလုံး ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ရှိမယ့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်အောင် ထူထောင်လာတာ။ ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတခုဘဲ ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။ အဲဒီတော့ ဒီလို ကျမ မှန်ကန်တဲ့ စေတနာထားတာကြောင့်မို့လို့ ကျမတို့ အဖွဲ့ချုပ်ကသာ အစိုးရဖြစ်လို့ ရှိရင် တပ်မတော်ဟာ တနေ့ထက်တနေ့ ပိုပြီးတော့ ဂုဏ်သိက္ခာလည်း မြင့်တက်ရမယ်။ ပြည်သူလူထုနဲ့လဲ စည်းလုံးရမယ်။ တပ်မတော် ပြိုကွဲရေးဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ကျမတော့ ယုံကြည်တယ်။…"
(ရန်ကုန်မြို့၌ ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဒေါ်စုပြောကြားခဲ့သော ရှင်းလင်းချက် များထဲမှ…)
အပိုင်း (၅) ကိုဆက်ရန်....
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 2:20 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
အမှောင်တိုက်မှ တပ်မတော်သားများ ရုန်းထွက်နိုင်စေရေး အပိုင်း (၃)
စစ်အာဏာရှင်များဖြစ်ကြတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး နေ၀င်း၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စောမောင်၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး သန်းရွှေတို့ရဲ့ ဆိုက်ကိုလိုဂျီ Warefare စိတ်ဓါတ် စစ်ဆင်ရေး နည်းဗျူဟာထဲတွင် နစ်မြောနေအောင် ရိုက်သွင်းထားရာ တပ်မတော်သားများ အနေဖြင့် အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းနှင့် သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့အပေါ် အမြင်မကြည်လင်မှု၊ တပ်မတော်အပေါ် သဘောထား မှန်ကန်ခြင်း မရှိဟု ထင်ယောင်ထင်မှား ဖြစ်နေကြပါတယ်။ ဒါကြောင့် စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား အဖွဲ့အနေဖြင့် ယနေ့တပ်မတော်သားများအား အမှောင်တိုက်မှ ရုန်းထွက်နိုင်စေရေးအတွက် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနှင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ရဲ့ မိန့်ခွန်းနှင့် သဘောထား ခံယူချက်များကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ယနေ့တပ်မတော်တွင် ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အခြေအနေများနှင့် နှိုင်းယှဉ် သုံးသပ်ပြီး ကဏ္ဍတစ်ရပ် အနေဖြင့် အပတ်စဉ် တင်ပြသွားဖို့ စီစဉ်ထားပြီး ဖြစ်ပါတယ်။
စစ်အာဏာရှင်တွေအနေနဲ့ တပ်မတော်သားများအား ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် အဆက်အသွယ်ပြတ်အောင် ပြုလုပ်ထားပြီး ပြည်သူလူထုအား နီးစပ်မှု မရှိစေရေးအတွက် စစ်တပ်အတွင်း ၀င်ပေါက် ထွက်ပေါက်များကို ပိတ်ဆို့ထားပါတယ်။ တပ်မတော်က ကယ်တင်ရှင် ကျေးဇူးရှင်ကြီးသဖွယ် အစည်းအဝေးပွဲများမှာ မှိုင်းသွင်းထားပြီး တိုင်းပြည်ချောက်ကမ်းပါးမှ လက်မတင်လေး ကယ်တင်လိုက်ရတဲ့ အနေအထားမျိုး သွတ်သွင်း ထားပါတယ်။ ဆည်မြောင်းတံတားများ ဖွင့်ပွဲတွေမှာ နိုင်ငံတော်ရဲ့ စေတနာ (သို့) တပ်မတော်ရဲ့ စေတနာဆိုပြီး ပြည်သူလူထုက တပ်မတော်ကို ကျေးဇူးတင် ပြောဆိုခိုင်းတဲ့ အစီအစဉ် ထည့်ခိုင်းထားပါတယ်။ မြို့တော်မြို့ကြီးများရှိ လမ်းတွေပြင် တဲ့အခါမှာ ကိုယ်ထူကိုယ်ထဆိုပြီး အစိုးရတပ်မတော်ကိုသာ အားမကိုးဘဲ ပြည်သူလူထုထံမှ အတင်းအဓမ္မ ငွေကြေး ကောက်ခံတာတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။ တပ်မတော်သားများ ပြင်ပ ပြည်သူလူထုရဲ့ သမီးပျိုများကို လက်ထပ်ပေါင်းသင်းမည်ဆိုပါက အရပ်ဘက် တရားရုံးတွင် တရားမ၀င်ကြောင်း တပ်ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း တပ်မတော်မှတ်တမ်းရုံးမှ Part –2အမိန့်နှင့် လက်ထပ်ခွင့်တင်မှသာ အကျုံးဝင်ကြောင်း သွေးခွဲထားပါတယ်။ တပ်မတော်သားများ တော်လှန်ရေးနေ့ စစ်ကြောင်းများ ချီတက်စဉ် ပြည်သူလူထုက ပန်းကုံးများစွပ်မည်ဆိုပါက ဗုံးပါမည်စိုးလို့ မိုင်းရှာကိရိယာများနှင့် စစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။ မင်္ဂလာဆောင်များတွင် လက်ဖွဲ့များ ပြည်သူလူထုက ပေးတဲ့အခါ ဗုံးပါမှာစိုးလို့ မိုင်းရှာကိရိယာနှင့် ထပ်မံစစ်ဆေးခဲ့ပါသေးတယ်။ တပ်မတော်သားများ မြို့ထဲ ပြည်သူလူထုအိမ်များသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပါက ခမောက်ရှိတဲ့အိမ်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံ ချိတ်ထားတဲ့အိမ်၊ ရှောင်ရှားဖို့ နှုတ်မိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ ပြင်ပလည်ပတ်ခွင့် ပြုရင်တောင် ယူနီဖောင်းဖြင့် မ၀တ်ဘဲ အရပ်ဝတ်ဖြင့် ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုး သွားဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။ ရှေ့တန်းနယ်မြေများတွင် ရွာလူကြီးများနှင့် ရွာသားများအား စာပေးပြီး ခေါ်ခိုင်းပါက စာထဲတွင် ကျည်ဆံထည့်ပြီး မလာမှာစိုးလို့ ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါ သေးတယ်။ ပေါ်တာများ ဆွဲလျှင်လည်း ကျေးကျွန်များသဖွယ် ဆက်ဆံခိုင်းပါတယ်။ အရပ်သားများနှင့် မှုခင်းများ ဖြစ်ပွားလျှင် ရဲစခန်းကို လက်နက်အားကိုးဖြင့် ၀ိုင်းဝန်းတပ်ပြီး နယ်ဘက်တရားရုံး မတင်ရေးအတွက် ဖိအားပေးပါတယ်။ အမှန်တကယ်တော့ အမျိုးသားခေါင်းဆောင်ကြီး ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်းဟာ တပ်မတော်သားများအား ပြည်သူလူထုအပေါ် နွေးထွေးစွာဆက်ဆံဖို့ စစ်သားစရိုက်ကို ပြည်သူလူထုအား နားလည်အောင် ရှင်းပြပေးဖို့ တိုက်တွန်းခဲ့ကြောင်း အောက်ပါ မိန့်ခွန်းများက သက်သေထူပါတယ်။
နိုင်ငံသူ နိုင်ငံသားများနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အခါ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး ဆက်ဆံပါ၊ မှန်မှန်ကန်ကန် ဆက်ဆံပါ၊ ရဲဘော်တို့ကို သူတို့ အားကိုးလာချင်အောင် အလုပ်လုပ်ပါ၊ ငါတို့ တပ်ထဲမှာတော့ ငါတို့အချင်းချင်း ပြောနည်းဆိုနည်း၊ လုပ်နည်းကိုင်နည်း၊ အမူအရာတို့ဟာ စစ်စကားပြော၊ စစ်သံပေး၊ စစ်အမူအရာထား၊ စစ်မာန်သွင်းတဲ့ အလေ့အထ ရှိကြပေမဲ့ အပြင်ဘက်က လူတွေအဖို့မှာ ဒါမျိုးတွေဟာ အထူးအဆန်း ဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့် သူတို့နဲ့ကျရင် စစ်သား အနေမျိုး မဟုတ်ဘဲ ရိုးရိုး ဗမာတဦးအနေနဲ့ ဆက်ဆံကြရမယ်၊ အဲဒါကို သတိထားကြရမယ် လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ငါတို့ဟာ ဓားရှိလို့ လက်နက်ရှိလို့ မတရား လွှမ်းမိုးချုပ်ချယ်တယ်၊ အနိုင်ကျင့်တယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး မရောက်ပါစေနဲ့။ လူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီတပ်မှ ဒို့တပ်၊ ဒီလူတွေမှ ဒို့လူ၊ ဒို့အားကိုးရမယ် ဆိုတဲ့ သဘောမျိုး ရောက်ပါစေ။…"
(စစ်ကြပ်သင်တန်း ဘွဲ့နှင်းအပ်ပွဲတွင် စစ်ဝန်ကြီး မေဂျာဂျင်နရယ်အောင်ဆန်း၏ မိန့်ခွန်းမှ…)
ငါတို့တပ်မတော်သည် ပြည်သူများမှ ဖြစ်ပေါ်လာ၍ ပြည်သူများ၏ လွတ်လပ်ရေးနှင့် ပြည်သူများ၏ အကျိုးကို စောင့်ရှောက်ကာကွယ်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ငါတို့တပ်မတော်သည် ပြည်သူ့တပ်မတော် ဖြစ်သည်။ ပြည်သူများနှင့် ကွဲပြားနေ၍ ပြည်သူများ၏ အကျိုးကို ရည်ရွယ်ရင်းမရှိသော တပ်မျိုးမဟုတ်၊ ပြည်သူ့တပ်မတော်သည် ပြည်သူများတွင် အခြေခံထား၍ ပြည်သူများနှင့် အဆက်အဖြတ် ကွဲပြားခြားနားခြင်းမရှိ၊ အမြေဲဆက်စပ်နေ၍ ပြည်သူတို့နှင့် တသားတည်း ရှိသည်။ ပြည်သူ့တပ်မတော်သည် ပြည်သူတို့ ၏ လက်ရုံးလက်သီး၊ ပြည်သူများ၏ ဓါးသွား ဖြစ်စေရမည်။ ထိုလက်သီး၊ လက်ရုံး၊ ဓါးသွားသည် ပြည်သူများ၏ ရန်သူကို တွန်းလှန်ရန်ဖြစ်သည်။ ထိုလက်သီး၊ လက်ရုံး၊ ဓါးသွားသည် ပြည်သူများ၏ အကျိုးကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် ပြည်သူ့ တပ်မတော်သားများ ဖြစ်ကြသော ရဲဘော်တို့ ပြည်သူ့တပ်မတော်သားပီပီ အောက်ပါအချက်များကို ကျင့်ကြံရမည်-
(၁) ပြည်သူပြည်သား အပေါင်းတို့အား အရာရှိ၊ အရာမဲ့၊ လူကြီး၊ လူငယ်၊ ယောက်ျား၊ မိန်းမ၊ လူမျိုးဘာသာမရွေး ဆက်ဆံတတ်ပါစေ၊ ဖေါ်ရွေကြပါ၊ ယဉ်ကျေးကြပါ၊ ကိုယ့် အမှား မရှိပါစေနှင့်၊ တရားမျှတကြပါ၊ ကြင်နာကြပါ၊ လေးစားကြပါ။
(၂) ကိုယ်နှင့်မဆိုင်တဲ့ အခြားသူ၏ အလုပ်ကို အနှောက်အယှက် မပြုပါနှင့်၊ သို့သော် ကိုယ့်ဝတ္တရား အချိန်တွင် မည်သူကိုမဆို ကူညီနိုင်သမျှ ကူညီပါ၊ ကူညီရာတွင် တရားလမ်းကျပါစေ။
(၃) ဗမာမဟုတ်သော နိုင်ငံအတွင်းရှိ လူမျိုးစုများကို ငါတို့တပ်တွင်းသော်၎င်း၊ ပြင်ပသော်၎င်း၊ ဆွေမျိုးရင်းချာကဲ့သို့ သဘောထားပါ၊ ၎င်းတို့ အလေ့အထ ဘာသာအတိုင်း ကိုးကွယ်ခြင်း၊ ပြောဆိုခြင်း၊ ၀တ်စားနေထိုင်ခြင်း အစရှိသည်တို့ကို မကဲ့ရဲ့ပါနှင့်၊ မပြောင်ပါနှင့်၊ မနှောက်ယှက်ပါနှင့်၊ ၎င်းတို့မခံချင်သည့် အပြောအဆို အသုံးအနှုန်းမျိုးကို ရှောင်ကျဉ်ပါ၊ ၎င်းတို့ကို ကူညီနိုင်လျှင် ကူညီပါ။
(က) အရက်မူး မရမ်းကားရ။
(ခ) မိန်းမများကို ကျူးလွန်စော်ကားခြင်းမပြုရ။
(၄) တည်းခိုသော အိမ်ယာများတွင် အခွင့်တောင်းပြီးမှ ၀င်ရမည်။ နေထိုင်စဉ်အခါ ညစ်ညစ်ညမ်းညမ်း မနေထိုင်ဘဲ သန့်သန့်ရှင်းရှင်း နေထိုင်ရမည်။ အိမ်မှ ထွက်ခွာသော အခါလည်း အပျက်အစီးများရှိက မိမိကြောင့်ဖြစ်က အစားထိုးပေးခြင်း၊ လျော်ကြေး ပေးခြင်း ပြုရမည်။
(၅) တန်ရာတန်ဘိုး မပေးဘဲ မ၀ယ်ပါနှင့်။
(၆) ချေးငှါးထားသော အရာကို ဆက်ဆက် ပြန်ပေးပါရန် မမေ့ပါနှင့်။
(၇) အထက်အမိန့်မရဘဲ ပစ္စည်းအတင်း မသိမ်းပါနှင့်။ အထက်အမိန့်အရ သိမ်းရစေကာမူ မဖွယ်မရာ မယဉ်မကျေး မပြုပါနှင့်၊ သူမခံနိုင်အောင် မလုပ်ပါနှင့်။
(၈) လူမျိုးအချင်းချင်း၎င်း၊ ကိုးကွယ်သော ဘာသာရေးနှင့် ပတ်သက်၍၎င်း၊ သွေးကွဲသည့် အလုပ်၊ မုန်းတီးစေမည့် အလုပ်ကို မလုပ်ပါနှင့်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 1:58 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်
သင်္ခါရ တရား နဲ့ စစ်အာဏာရှင်များ – အပိုင်း(၂)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ခင်ညွှန့်ဟာ သူ့ကိုထားမဲ့ အကျယ်ချုပ်အိမ်ကို စတင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ နေ့မှာဘဲ သူ့ရဲ့ ယူနီဖောင်းအား လဲလှယ်ဖို့ ကက(ကြည်း)က အမိန့်ပေးမှုကို မခံနိုင်ဘဲ အမြင့်မှ ရုတ်တရက် ပြုတ်ကျလာသူရဲ့ စိတ်ထိခိုက် ပေါက်ကွဲမှုနဲ့အတူ ငြင်းဆန်ခဲ့လို့ ညစဉ်သူအိပ်တိုင်း အနီးကပ် စောင့်ကြည့်ဖို့ ထားရတဲ့ အာဏာပါးကွက်သား လူကြမ်း(၂) ဦးနဲ့ နှစ်ပါးသွားရပုံဟာဖြင့် သံဝေဂ ရစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
အင်းလျားကန်ကြီးဟာ မြန်မာနိုင်ငံ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပုံရိပ်တွေကို သက်သေ ထူနေပါတယ်။ ကိုလိုနီခေတ်မှာ ဂဠုန်ဦးစောဟာ ၀န်ကြီးချုပ် ဖြစ်ခဲ့ပြီးမှ အမျိုးသား ခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို လုပ်ကြံခဲ့လို့ မြန်မာ့သမိုင်းမှာ အရုပ်ဆိုးစေတဲ့ အဲဒီဖြစ်ရပ်ကို အင်းလျားကန်ကြီးက သိနေခဲ့တဲ့ အကြောင်း ပထမဦးစွာ တင်ပြချင်ပါတယ်။
အဲဒီတုန်းက အင်းလျားကန်စောင်း နံဘေးမှာ ဂဠုန်ဦးစောနဲ့ နောက်ပါ လက်ပါးစေများဟာ အရက်သေစာ သောက်စားပျော်ရွှင် မြူးတူးခဲ့ကြပြီး လက်နက်ခဲယမ်း သေတ္တာတွေကို အင်းလျားကန် အတွင်း မြုပ်နှံခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂဠုန်ဦးစောသမီး အိမ်မှန်းမသိဘဲ ကား အရောင်းအ၀ယ် ကိစ္စနဲ့ ရောက်သွားသူ တစ်ဦးဟာ အဲဒီအိမ်မှာ ချိတ်ထားတဲ့ ဦးစော ဓာတ်ပုံကြီးကို ရုတ်တရက် မြင်လိုက်ရချိန်က ဦးစောမှန်း မသိသေးဘဲ ကျက်သရေမရှိ ယုတ်မာ ကောက်ကျစ်တဲ့ မျက်နှာလို့ မှတ်ချက် ပြုခဲ့ဖူးပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ဦးစောမှန်း သိပြီးနောက် အဲဒီအိမ်နဲ့ မပတ်သက်တော့ဘဲ ဝေးဝေးက ရှောင်ပါတော့တယ်။ ဂဠုန်ဦးစောရဲ့ သားစဉ် မြေးဆက် တလျှောက်ဟာ ရောက်လေရာ နေရာတိုင်းမှာ မြန်မာပြည်သူတွေက ရှုတ်ချ အပယ်ခံတဲ့ဘ၀ ရောက်ခဲ့ရပါတယ်။
ပြည်သူလေးစား ချစ်ခင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို သတ်တဲ့ ဂဠုန်ဦးစောကို ရှုတ်ချ သေဒါဏ်ပေးအပ်ခဲ့သလို ပြည်သူလေးစား ချစ်ခင်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း သမီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဘ၀ကို သတ်သလို နှစ်ရှည် နေအိမ် အကျယ်ချုပ် ချထားတဲ့ ဘီလူးသန်းရွှေကိုလည်း ရှုတ်ချ သေဒါဏ်ပေးဖို့ သင့်ပါတယ်။ အင်းလျားကန် စောင်းနံဘေးမှာ ရှိတဲ့ ဒေါ်ဝါ၀ါဝင်းရွှေရဲ့ ဟိုတယ်မှာ အာဏာရှင်တွေ အားကိုးနဲ့ ဒုစရိုက်ပေါင်းစုံ ဖွင့်ခွင့်ပြုခဲ့ရာ လွတ်မြောက်နယ်မြေ ဖြစ်နေပြီး အာဏာရှင်တွေကိုယ်တိုင် ဟိုတယ်မယ်လေးတွေနဲ့ ပျော်ပါးရာ နေရာလေး ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ကိုတေဇရဲ့ အဖား ကောင်းမှုကြောင့် ဗိုလ်သန်းရွှေရဲ့ မြေးလေး မူယစ်ဆေးစွဲတဲ့အခါကျမှ အာဏာရှင် ဗိုလ်သန်းရွှေလည်း မျက်ဖြူဆိုက်ရတဲ့ဘ၀ ဆိုက်ရောက်ခဲ့တဲ့ အထိ ဖြစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
မဆလခေတ်က အင်းလျားကန်စောင်း အင်းလျားကန် ဟိုတယ်မှာ ဦးနေ၀င်းရဲ့ သမီးတွေဟာ Night Club “ပွတ်သဘင်” ပွဲ သံတမန်တွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စွာ ဆင်နွှဲမြူးတူးခဲ့လို့ ဦးနေ၀င်း ဒေါသူပုန်ထ သွားရောက် ကြမ်းရမ်းခဲ့ရာမှ သံတမန်တွေနဲ့ တီးဝိုင်းသမားများ ပြေးသူပြေး ပုန်းသူပုန်း ရုပ်ပျက် ဆင်းပျက် ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ဖြစ်စဉ် တွေကိုလည်း အင်းလျားကန်ကြီးက သိရှိပြီး ပုံရိပ်ထင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း ဟာ သူမ စီးလာတဲ့ ကားနဲ့ ရဲချုပ် စံသိန်းရဲ့ သမီး စီးလာတဲ့ကား ရုတ်တရက် တိုက်ခံရစဉ်မှာ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း က “ကိုခင်ညွှန့် ကြည့်လုပ်ပေးပါဦး” ဆိုပြီး တိုင်တဲ့အပြင် ဦးနေ၀င်းက “ခင်ညွှန့် ငါမသေ သေးဘူး” လို့ ငေါက်ငမ်းတဲ့အတွက် ရဲချုပ် စံသိန်းခမျာ စပိန် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် နှင်ထုတ်ခြင်းကို ခံလိုက်ရပါတယ်။
ဒီဖြစ်စဉ်ကို သိနေတဲ့ နောက်တက်လာတဲ့ ရဲချုပ် ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးဝင်းဟာ ဦးနေ၀င်း မြေးတွေကို အစွမ်းကုန် “ဖား” ပြီး အကာအကွယ် ပေးတာမို့ ဦးနေ၀င်း မြေးတွေကလည်း ရဲတွေအတွက် ၀တ်စုံချုပ်ပေး ငွေကြေးအင်အား ပံ့ပိုးထားကြလို့ ရန်ကုန်မြို့မှာ တရားဥပဒေမဲ့ ကြမ်းချင်တိုင်း ကြမ်း၊ ရမ်းချင်တိုင်း ရမ်း သောင်းကျန်း ကြတာကြောင့် သူတို့စီးလာတဲ့ ကားဆိုရင် ဝေးဝေး ရှောင်ကြရပါတယ်။ အဲဒီနောက် ဦးနေ၀င်း ဇာတ်သိမ်းတဲ့ အချိန်မှာ ဗိုလ်မှူးကြီး စိုးဝင်းကို တန်းဖြုတ်ခဲ့ပါတော့တယ်။ အလားတူ သနက (၄) တပ်ရင်းဟာ ဦးနေ၀င်းရဲ့ အနီးကပ် လုံခြုံရေး တာဝန်ယူရတဲ့ တပ်ရင်း ဖြစ်ပါတယ်။
တပ်ရင်းမှူး ဒုဗိုလ်မှူးကြီး ကျော်မြင့်ဟာ ဦးနေ၀င်း အရှိန်အ၀ါ သုံးကာ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် အစည်းအဝေး တွေမှာတောင် အဖေကြီး (ဦးနေ၀င်း) နေမကောင်းလို့ အကြောင်းပြကာ မထီမဲ့မြင် လုပ်တဲ့ အခြေအနေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီတပ်ရင်းက စစ်သည်တွေနဲ့ ပြဿနာဖြစ်တိုင်း၊ ဖြစ်တဲ့သူဟာ ဘယ်လောက်မှန်မှန် အရှုံးနဲ့ ရင်ဆိုင်ရစမြဲမို့ ရန်ကုန်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တပ်ချင်း တူတာတောင် သနက (၄) တပ်ရင်းအနေနဲ့ အခွင့်ထူးခံ ရရှိသူများ ဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဦးနေ၀င်း မြေးတွေကို အာဏာသိမ်းရန် ကြံစည်မှုအတွက် အရေးယူတာ မဖြစ်ပွား ခင်လေးမှာ ဦးနေ၀င်း မြေးတွေရဲ့  မြှောက်စားမှုကြောင့် အဲဒီ စစ်သည်တွေကို အကောင်းစား စစ်ဝတ်စုံများ ချုပ်ပေးပြီး ငပလီ မှာတောင် အပန်းဖြေခွင့် ပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဦးနေ၀င်းနဲ့ မြေးတွေကို အရေးယူလိုက်တဲ့အခါမှာ သနက (၄) တပ်ရင်း တစ်ရင်းလုံးကို တပ်မ (၁၁) ရဲမွန်သို့ မိန်းမ၊ ကလေးတွေပါမကျန်အောင် အချုပ်ကားများနဲ့ ပို့လိုက်ပြီး စစ်ကြောရေး အထပ်ထပ် ၀င်ကာ ထောင်ချသူ ချ၊ ကျန်သူများကို ကျောက်တန်းရှိ လွင်တီးခေါင် နယ်မြေသို့ တိရိစ္ဆာန်များသဖွယ် နှင်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။
သူမကို မလိုမုန်းထား ပြိုင်ဘက်အဖြစ် သတ်မှတ်နေတဲ့ ဦးနေ၀င်းရဲ့ သမီး ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်း ဟာ မနာလို မရှုစိတ် ဖြစ်ခဲ့ပြီး ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို “သတ္တိရှိရင် သေနတ်ချင်း ပြိုင်ပစ်မလား” လို့တောင် စိန်ခေါ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းဟာ ဦးနေ၀င်းကို နောက်ကွယ်က ကြိုးကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး သူ့သားတွေရဲ့  အာဏာသိမ်းရေး စီမံချက်ကို ဖန်တီး ဆောင်ရွက်ခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အဓိက အကြောင်းရင်း နောက်တချက်က ဒေါ်ခင်စန္ဒာဝင်းဟာ ဗိုလ်ခင်ညွှန့်အပေါ် သြဇာ လွမ်းမိုးနေပြီး သူမသားတွေရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး ဂြိုလ်တု ဖုန်းကိစ္စကို န၀တက မလိုက်လျောခဲ့လို့ မကျေမနပ် ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။
သူမသားတွေဟာ တယ်လီဖုန်း ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ပြည်သူလူထု ထံက ဖုန်းတစ်လုံးကို ကျပ်ငွေ (၅) သိန်း ကြိုတင်ကောက်ခံထားရာ ထိုငွေများကို ပြန်အမ်း ပေးရန်နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို န၀တက ရုတ်သိမ်းလိုက်ရာက စတင်ပဋိပက္ခ ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ အဲဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆက်သွယ်ရေးနဲ့ ကြေးနန်းစာ တိုက်ဝန်ကြီး ဗိုလ်မှူးချုပ် ၀င်းတင် ကိုလည်း န၀တက ဖြုတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။
ဦးနေ၀င်း သေဆုံးတဲ့အခါမှာ အလောင်းကို မီးရှို့ပစ်ပြီး ရက်မဆိုင်းစေဘဲ ရေထဲကို မျှောချ ခိုင်းလိုက် တာကလည်း တရားကျစရာ ကောင်းလှပါတော့တယ်။ အာဏာရှင်တွေရဲ့ ဇာတ်သိမ်းပုံကို သတိသံဝေဂ ယူပြီး တပ်မတော်သားများ အနေနဲ့ မတရားတဲ့ အမိန့်နဲ့ ဖောက်ပြန် နေကြတဲ့ စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့ လက်အောက်မှာ ဆက်လက်ရပ်တည် နေကြမယ်ဆိုရင် သမိုင်း ဒါဏ်ခတ် ခံရကာ “ရဲဘော်သေ၊ သေသော်ငရဲလား” မည် ဖြစ်ကြောင်း ဆင်ခြင်သုံးသပ်နိုင်ရန် စစ်ဘက်နီးစပ်သူများက စည်းလုံးခြင်းရဲ့အင်အား ၀က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ တင်ပြလာပါတယ်။
တင်ပြသူ ကိုကိုကျော် အချိန် 3:42 PM0ယောက် အကြံပြုထားပါသည်